2daty Bokin'i Makabeo – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / 2daty Bokin'i Makabeo
2 Makabeo 1
1:1 Ho an'ny rahalahy, ny Jiosy, izay manerana an'i Ejipta: rahalahy, ny Jiosy, izay any Jerosalema sy tany amin'ny faritr'i Jodia, mandefa fiarahabana sy ny fiadanana tsara.
1:2 Enga anie Andriamanitra anie hanisy soa anao, ary aoka izy hahatsiaro ny fanekeny, izay nampilazaina an'i Abrahama, ary Isaka, ary Jakoba, ny mpanompony tsy mivadika.
1:3 Ary enga anie Izy hanome anareo rehetra ny fo mba hivavaka aminy, sy hanao ny sitrapony, mafy fo sy fanahy marisika.
1:4 Enga anie izy hitoraka hanokatra ny fonao sy ny lalàna ary ny didy, ary enga anie izy mamorona fiadanana.
1:5 Aoka izy hihaino ny vavaka, ary hihavana aminao, ary enga anie tsy handao anareo amin'ny amin'ny andro mampahory izao.
1:6 Ary ankehitriny, eto amin'ity toerana ity, isika dia mivavaka ho anareo.
1:7 Rehefa nanjakan'i Demetriosa, ao amin'ny iray amby enim-polo amby zato taona fahasivy, Jiosy isika nanoratra ho anareo mandritra ny fahoriana sy ny herisetra, izay naharesy antsika tamin'izany taona, hatramin'ny andro Jason niala avy any amin'ny tany masina sy ny fanjakana.
1:8 Ary nandoro ny vavahady, ary izy ireo, nandatsaka rà marina. Ary nivavaka tamin'i Jehovah ka nandre, ary navoakany sorona sy Lafarinina varimbazaha tsara toto, ary nirehitra ny lela fanaovan-jiro ary hanangona ny mofo.
1:9 Ary ankehitriny, hankalaza ny andro ny trano fialofana tamin'ny volana Kislev.
1:10 Tamin'ny valo-polo amby zato taona fahavalo-, avy any amin'ny firenena izay any Jerosalema sy tany Jodia, ary avy any amin'ny Antenimieran-doholona ary Jodasy: ho Aristobule, ny mpanapaka ny mpanjaka Ptolémée, izay avy amin'ny razambeny voahosotra mpisorona, ary ho an 'ireo Jiosy, izay any Egypta: fiarahabana sy ny fahasalamana tsara.
1:11 Rehefa nafahana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny loza lehibe, Misaotra azy indrindra, in araka izay efa sahirana isika hanohitra lehibe toy izany mpanjaka.
1:12 Fa nahatonga an'ireo niady antsika sy hamely ny tanàna masina ho triatra avy Persia.
1:13 Fa raha ny mpitari-tafika ny tenany tao Persia, ary niaraka taminy ny tafika goavana, dia lavo tao amin'ny fitoerana masin'i Nanea, rehefa voafitaky ny torohevitry ny mpisoron'i Nanea.
1:14 Fa Antiôkosy koa tonga teo amin'ny namany, toy ny hoe ho velona aminy, ary toy izany koa fa hahazo vola be amin 'ny anaran' ny anjara.
1:15 Ary raha ny mpisoron'i Nanea efa nanao ny tolo-kevitra, ary efa niditra tamin'ny vitsivitsy ho eo an-vestibule 'ny toerana masina, Nakatony ny tempoly,,
1:16 rehefa avy Antiokosa efa niditra. Ary manipy misokatra ny miafina fidirana amin 'ny tempoly, dia nitora-bato, ka dia namely ny mpitarika sy ireo izay niaraka taminy. Ary, rehefa nanapaka ny ratsam-batany ka notapahiny ny lohany, dia nandroaka azy roa lahy ivelany.
1:17 Isaorana anie Andriamanitra amin'ny alalan'ny zava-drehetra, Izay efa nanolotra ny ratsy fanahy.
1:18 Noho izany, fananganana ny fanadiovana ny tempoly tamin'ny andro fahadimy amby roa-polo tamin'ny volana Kislev, Nihevitra izahay tsy maintsy midika izany aminao, mba, toy izany koa, Mety hitandrina ny andro fialofana, ary ny andro ny afo izay nomena rehefa namono zavatra hatao fanatitra Nehemia, araka ny tempoly sy ny alitara dia voaorina.
1:19 Fa raha ny razantsika dia nentina tany Persa, ny mpisorona, izay amin'ny andro izany dia nisy mpivavaka amin'Andriamanitra, naka mangingina ny afo avy amin'ny alitara, ka dia mbola nitandrina izany nafenina tany an-dohasaha, izay nisy lavaka lalina sy maina, ka dia mbola nitandrina azy soa aman-tsara amin'izany toerana, amin'ny fomba ny toerana ho tsy fantatra rehetra.
1:20 Fa nony nandritra ny taona maro no lasa, dia sitrak'i Andriamanitra Nehemia tokony naniraka ny mpanjakan'i Persia, dia naniraka ny sasany tamin'ny taranak'ireo mpisorona nanafina azy io izay efa hitady ny afo. Ary, toy ny nilaza taminay, tsy nahita afo, fa ny rano lalina.
1:21 Dia nandidy azy ireo mba hanao izany, ka hitondra izany ho azy. Ary ny mpisorona, Nehemia, nandidy ny sorona, izay efa niainga, mba ho voadio amin'ny mitovy rano, na ny hazo sy ireo zavatra tonga teo napetraka eo amboniny.
1:22 Ary rehefa vita izany, ary tonga ny fotoana, raha namirapiratra ny masoandro mamirapiratra, izay taloha tao amin'ny rahona, dia nirehitra afo lehibe, loatra ka rehetra dia feno zava-mahagaga.
1:23 Fa ny mpisorona rehetra dia mitanisa vavaka, raha ny fanatitra ho levona, amin'i Jonatana fiandohana sy ny sisa namaly.
1:24 Ary ny fivavaky ny Nehemia dia natao toy izany: "Jehovah Tompo ô, Mpamorona ny rehetra, mahatahotra sy mahery, marina sy be famindram-po, ianao irery ihany no tsara Mpanjaka.
1:25 Ianao irery ihany no tsara indrindra, Ianao irery no marina, ary mahery indrindra, sy mandrakizay, Izay manafaka ny Isiraely tamin'ny loza rehetra:, izay namorona ny voafidy ray sy nohamasininy.
1:26 Raiso ny sorona ho an'ny rehetra ny Israely olonao, ary hiaro ary hamasino ny anjara.
1:27 Hanangona ny pielezana, hanafaka izay voageja amin'ny hafa firenena, ary hanaja ireo izay tsinontsinona sy ho zava-betaveta, ka dia amin'ny jentilisa aoka ho fantany fa ianao no Andriamanitray.
1:28 Mampahory ireo izay, ny fiavonavonany, dia mampahory antsika sy mitondra antsika dratsy.
1:29 Ampio ny olona ao amin'ny fitoerana masina, araka hoy Mosesy. "
1:30 Ary toy izany koa ny mpisorona nihira fiderana mandra-sorona efa lany ritra.
1:31 Fa rehefa ny sorona efa lany ritra, Nehemia nanome baiko ny sisa amin'ny rano araraka eo amin'ny vato lehibe.
1:32 Ary rehefa natao izany, misy lelafo nirehitra azy, fa efa levon'ny ny fahazavana izay mamirapiratra namirapiratra avy teo amin'ny alitara.
1:33 Raha ny marina, rehefa izany zavatra izany dia tonga fantatra, Dia nisy nilaza tamin'ny mpanjakan'i Persia fa teo amin'ny toerana izay efa nafenina afo 'ireo mpisorona izay efa lasan-davitra izy, rano niseho, izay Nehemia, sy ireo izay niaraka taminy, nodioviny koa ny sorona.
1:34 Fa ny mpanjaka, mandinika ary nandinika ilay raharaha amim-pahazotoana, nanao tempoly ho azy, ka mba hianatra ny zava-nitranga.
1:35 Ary rehefa nianatra azy, dia nomeny ny mpisorona maro ny entana sy ny fanomezana, ny iray na ny iray hafa tsara fanahy, sy ny fampiasana ny tanana, dia nizara izany.
1:36 Ary Nehemia hoe ity toerana ity Nephthar, izay raisina ho toy ny fanadiovana. Fa amin'ny maro izany dia antsoina hoe 'i Nefia.
2 Makabeo 2
2:1 Ankehitriny izany dia hita ao amin'ny famaritana ny mpaminany Jeremia fa nandidy ireo izay transmigrated handray ny afo, fotsiny araka izay midika ary raha baiko, ho any an-transmigration.
2:2 Ka dia nanome azy ny lalàna, ka fa tsy manadino ny didin 'ny Tompo, ary toy izany koa izy ireo fa tsy handeha lalan-diso ao an-tsainy, nahita ny sampy volamena sy volafotsy, ary ny firavany.
2:3 Ary izany no fomba, amin'ny teny hafa, dia nananatra azy, fandrao manala ny lalàna ao am-pony.
2:4 Koa, dia ao amin 'ny soratra, Ahoana ny mpaminany, Araka ny valin-, nandidy fa ny tabernakely sy ny fiara hatao mba hiaraka aminy, mandra-nivoaka avy teo an-tendrombohitra, izay niakatra Mosesy ka nahita ny lova nomen'Andriamanitra.
2:5 Ary tonga teo, Jeremia nahita toerana ao anaty lava-bato. Ary nentiny nanatona koa ny tabernakely roa, ary ny fiara, ary ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra ho any amin'io toerana io, ary nanohintohina fanombohana.
2:6 Ary ny sasany izay nanaraka azy, nanatona mba hanao fanamarihana ny toerana, nefa tsy azony fantarina akory.
2:7 Fantatr'i Jeremia fa rehefa izany, tsiny izy ireo, nanao hoe:: "Ny toerana dia ho fantatra, mandra-Andriamanitra dia hanangona ny fiangonana, dia ny vahoaka, ary mandra-tsara izy, dia azo nanongilana.
2:8 Ary avy eo ny Tompo dia hanambara ireo zavatra ireo, sy ny fahalehibiazan'i Jehovah dia hiseho, ary dia hisy rahona, araka izay naseho ihany koa Mosesy, ary araka izay nasehony ireo Solomona, rehefa nangataka izany ny toerana tokony hohamasinina ny lehibe Andriamanitra.
2:9 Fa izy koa nisarika teo fahendrena Nahafinaritra ny, ary noho izany, manana fahendrena, no nanaterany ny sorona ny amin'ny fanoloran-tena sy ny consummation ny tempoly.
2:10 Ary, tahaka an'i Mosesy nivavaka tamin'ny Tompo, ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandevona ny fanatitra dorana, toy izany koa, Solomona izao nivavaka ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandevona ny fanatitra dorana.
2:11 Ary hoy Mosesy fa voalaza levona, satria fanatitra noho ny ota dia tsy mba nihinana.
2:12 Ary toy izany koa, Solomona koa dia nankalaza ny valo andro ny fitokanana.
2:13 Koa, ihany izany zavatra izany dia nataony tao amin'ny famaritana sy ny fanehoan-kevitra Nehemia, anisan'izany ny fomba, rehefa fanorenana ny trano famakiam-boky, dia nivory avy any amin'ny faritra ny boky ao amin'ny Mpaminany, ary Davida, ary ny epistily 'ny mpanjaka, ary avy amin'ny Fanahy fanomezam-pahasoavana.
2:14 Ary, toy izany koa, Jodasy ihany koa ny nanangona ny zavatra rehetra izay rava noho ny ady izay nanjo anay, ary ireo no miaraka aminay.
2:15 Noho izany, Raha maniry izany zavatra izany ianao, mandefa ireo izay mety hitondra azy ireo ho any aminao.
2:16 Ary noho izany, satria isika dia nankalaza ny fanadiovana, nanoratra ho anareo izahay,. Noho izany, dia manao tsara, raha mitandrina izany andro.
2:17 Manantena anefa isika fa Andriamanitra, Izay Nanafaka ny vahoakany, ary efa nadika ho amin'ny lova rehetra, sy ny fanjakana, sy ny fisoronana, ary ny fanamasinana,
2:18 araka izay nampanantenainy ao amin'ny lalàna, haingana dia mamindra fo aminay, ary angòny izahay dia tsy ho eo ambanin'ny lanitra ao amin'ny fitoerana masina.
2:19 Fa efa namonjy antsika ho afaka amin'ny loza lehibe, ary efa voadiony ny toerana.
2:20 Ny marina momba an'i Jodasy Makabeo, sy ny rahalahiny, ary ny fanadiovana ny tempoly lehibe, ary ny fitokanana ny alitara,
2:21 ary koa ny momba ny ady, izay mikasika ny Antiokosa Epifana, sy ny Zanany, Eupator,
2:22 ary ny illuminations, izay tonga avy tany an-danitra ho an 'ireo izay nanao zavatra ho an'ny Jiosy tamin'ny herimpo, dia toy izany izy ireo, na dia vitsy, voamarina ny faritra iray manontolo ka nataony vaky nandositra maro be avy tompon-,
2:23 ka dia azony indray ny tempoly malaza indrindra amin'izao tontolo izao, ary nanafaka ny tanàna, ary namerina tamin'ny laoniny ny lalàna izay nofoanana. Fa Jehovah, amin'ny filaminana, dia miasa tsara amin'izy ireo.
2:24 Ary toy izany koa ny zavatra toy ny efa ahitana tamin'ny boky dimy amin'ny Jason ny Cyrenean, efa niezaka abridge ho boky iray.
2:25 Fa, fandinihana ny vahoaka ny boky, ary ny olana fa ireo izay vonona ny manatanteraka ny narrations ny tantara mahita, noho ny hamaroan'ny zava-nitranga,
2:26 efa nikarakara, amin'izay mba, tokoa, ireo izay vonona ny hamaky mety ho mahafinaritra ny saina, ary mba, amin'ny fahamarinana, Nazoto nianatra kokoa ny mety ho afaka mora foana ny manao izany ho fahatsiarovana, ary koa mba mpamaky rehetra Mety mahasoa.
2:27 ary tokoa, isika, izay efa nandray ny asa ny abridging ity asa ity, tsy manana asa mora. Fa, amin'ny fahamarinana, tsara kokoa, Nihevitra izahay ny asa feno mailo sy ny hatsembohana.
2:28 Tahaka ireo izay manomana fanasana ihany koa ny mitady ny hihaino tsara ny sitrapon 'ny hafa, noho ny amin'ny fankasitrahana ny maro, isika manatanteraka ny asa an-tsitrapo.
2:29 Tokoa, mandao ny mpanoratra ny fahamarinana momba ny tsipiriany manokana, izahay, fa efa natokana ho amin'izany teny, miezaka ny ho fohy.
2:30 Fa, toy ny mpanao mari-trano iray trano vaovao ho fiahiana ny rafitra iray manontolo, ary, amin'ny fahamarinana, izay mikarakara hanoratanao dia hitady izay mendrika ny hampahamendrika izany, toy izany koa ny zavatra toy izany dia tokony hodinihina eto amintsika.
2:31 Koa, ny manangona fahalalana, ary ny hanafatra teny, ary mba hiresahana hevitra tsara rehetra manokana, dia ny anjara-raharahany ny amin'ny mpanoratra ny tantara.
2:32 Na izany aza tena, ny hanohy hafohin'ny teny, ary ny hanalavitra ny fanitarana ny raharaha, dia nilefitra any amin'ny abbreviator.
2:33 Noho izany, eto dia hanomboka ny fitantarana. Aoka betsaka ho ampy ny milaza amin'ny sasin. Fa hadalana ny handeha sy eo alohan'ny kaonty, raha ny tantara mihitsy no fohy.
2 Makabeo 3
3:1 Noho izany, ny fitoerana masina, ny tanàna ny mponina rehetra soa aman-tsara, ary koa ny lalàna dia mbola nitandrina tsara noho ny toe an'i Oniasa, ny mpisoronabe, ary ny fankahalana izay ny ainy ny ratsy natao,
3:2 nony fa na dia ny mpanjaka sy ny mpanapaka tena nandinika ny toerana mendrika ny voninahitra ambony indrindra, koa araka izany ny nankalaza ny tempoly tamin'ny fanomezana lehibe indrindra,
3:3 be ka Séleucus, mpanjakan'i Asia, izay voaisy fipetrahana avy amin'ny vola miditra ny vola lany rehetra amin'ny fanompoana mikasika ny sorona.
3:4 fa Simon, avy tamin'ny firenen'i Benjamina, rehefa voatendry ho mpiandraikitra ny tempoly, nanohintohina ny mpisoronabe, mba ny manao karazana heloka tao an-tanàna.
3:5 Fa rehefa tsy afaka handresy Oniasa, dia lasa izy nankany Apolloniosa, ny zanak'i avy any Tarsosy, izay tamin'izany andro izany no governoran'i Coelesyria sy Fenisia,
3:6 ka nanambara taminy fa ny trano firaketana ao Jerosalema dia feno vola tsy tambo isaina, ary ny trano firaketana iombonana, izay tsy mikasika ny ny anjara ho an'ny fanatitra, dia be, ary dia ho azo atao ho an'ny rehetra izany mba lavo eo ambany ny herin 'ny mpanjaka.
3:7 Ary rehefa nanolotra ny vaovao fa nampody ny mpanjaka Apollonius momba ny vola, dia niantso Heliodora, izay miandraikitra ny amin'izany zavatra izany, ary dia nirahiny amin'ny didy, mba hitaterana ny aforesaid vola.
3:8 Ary niaraka tamin'izay Heliodora nametraka nivoaka teny an-dalana, tokoa, niseho toy ny hoe vahiny ny tanànan'i Coelesyria sy Fenisia, fa marina ny antony dia ny hamita ny hevitra naroso ny mpanjaka.
3:9 Fa, rehefa tonga tany Jerosalema, ary efa tsara fanahy nanaiky an-tanàna ny mpisoronabe, dia nohazavainy taminy ny vaovao izay efa nomena momba ny vola. Ary malalaka nampahafantatra ny antony izay izy ankehitriny. Fa nanontany raha izany no tena toy izany.
3:10 Ary tamin'izany ny mpisoronabe dia nanambara taminy fa ireo zavatra ireo efa napetraka, miaraka amin'ny vatsy ho an'ny vehivavy maty vady sy ny kamboty.
3:11 Raha ny marina, ny vola sasany vidiny amin'ny ratsy fanahy izay efa nitatitra Simon an'i Hyrcan, zanak'i Tobia, tena ambony ny olona. Fa ny vola iray manontolo dia efa-jato sy talenta volafotsy roan-jato volamena.
3:12 Fa ao amin'ny marina, mba hamitaka ireo izay natoky ny toerana, ary ny tempoly izay hajaina eran'izao tontolo izao noho ny omem-boninahitra sy masina ho tanteraka mihitsy.
3:13 Fa noho ireo zavatra izay natao toy ny baiko avy amin'ny mpanjaka, nilaza izy fa ny rehetra dia midika hoe ny vola tsy maintsy nafindra tany amin'ny mpanjaka.
3:14 Ary noho izany, tamin'ny andro voatondro, Heliodora niditra mba hametraka ireo zavatra ireo mba. Na izany aza tena, tsy nisy ny vola kely no nitebiteby manerana ny tanàna manontolo.
3:15 Ary toy izany koa ny mpisorona nanipy ny tenany teo anoloan'ny otely ny mpisorona fitafiana, ka dia niantso azy an-danitra, izay nametraka ny lalàna momba ny mipetraka, izany fa ireo izay efa napetrany fa azo antoka hitandrina azy.
3:16 ankehitriny tokoa, na iza na iza nahita ny tarehin'ny mpisoronabe Naratra ao an-tsaina. Fa ny tarehiny sy ny fiovan'ny ny ny loko anatiny nilaza ny alahelon'ny fo.
3:17 Noho izany ny olona iray dia tena naroboka tao alahelo sy ny ara-batana hatahotra fa mazava ho an'ireo izay nahita azy fa efa fiantraikany alahelo ny fony.
3:18 Ary ankehitriny, olon-kafa niara-nikoriana ondry avy any an-trano, nitalaho sy manao fifonana-bahoaka, amin'ny anaran'ny ny toerana, izay vao mety ho tsinontsinona.
3:19 Ary ny vehivavy, mifono amin'ny lamba fisaonana manodidina ny tratrany, niara-nikoriana tamin'ny alalan'ny an-dalambe. Ary na dia ny virijina, izay cloistered, Nihazakazaka nivoaka ny Oniasa, ary ny hafa haingana tany amin'ny rindrina, ary, tena, nijery ny sasany eo am-baravarankely.
3:20 Fa ny olona rehetra ny iray tamin'izy ireo, omban'ny aninjiranao ny tànany manandrify ny lanitra, nitalaho.
3:21 Fa ny fanantenan'ny maro samy hafa firenena, ary ny mpisorona lehibe amin'ny fanaintainana, dia ho fanafiana masina na iza na iza amin'ny fo.
3:22 ary tokoa, ireo antsoina Andriamanitra tsitoha, ka ny fahatokiana izay efa nomena azy ireo fa ho voaro amin'ny hivadika.
3:23 Fa Heliodora vita toy izany izay efa Namoaka didy, satria ny tenany ankehitriny any amin'ny tany, amin'ny mpanompony, akaikin'ny fandatsahan-drakitra.
3:24 Ary ny Fanahin 'Andriamanitra Mahery Indrindra nanao fisehoan'ny lehibe ny fanatrehany, loatra ka izay rehetra efa sahisahy foana izy manaiky azy Dia nania ny torana sy ny horohoro, nianjera tamin 'ny herin' Andriamanitra.
3:25 Fa niseho taminy soavaly iray, manana mahatsiravina mpitaingina azy, voaravaka tsara indrindra sarona, Ary Nihazakazaka nivoaka ka nanafika Heliodora ny kitrony aloha. Ary izay nitaingina azy toa manana fiadiana volamena.
3:26 Koa, nisy roa hafa koa niseho tanora amin'ny endriky ny hery, ny voninahitry ny ambony, ary ny akanjo ny famirapiratana. Ireo nitsangana teo azy isaky ny lafiny, ary nokapohiny, ka aza mitsahatra, namely maro ho fanindronana.
3:27 Heliodora tampoka Dia lavo tamin'ny tany, ary dia nentiny niakatra haingana, mirakotra lehibe haizina, ary, dia nametraka azy teo amin'ny filanjana, dia haingana azy.
3:28 Ary noho izany, izay efa nanatona ny aforesaid fandatsahan-drakitra, miaraka amin'ny maro manam-pahefana sy ny mpanompony, dia nentina ho babo, ary tsy hisy hitondra fanampiana ho azy, ny hita herin 'Andriamanitra, rehefa natao fantatra.
3:29 ary tokoa, amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra, nandry moana ary koa dia omena fanantenana ny rehetra sitrana.
3:30 Fa dia nisaotra an'i Jehovah, satria efa lehibe tokoa ny toerana, ary satria ny tempoly, izay kely raha mbola teo anatrehan'i feno tabataba sy ny tahotra, nanjary feno fifaliana sy ny firavoravoana, rehefa Tompo mahery rehetra-niseho.
3:31 Avy eo, tena, sasany naman'i Heliodora nivoaka ny hitalaho amin'i Oniasa, ka dia mba miantso ny Avo Indrindra mba hanome fiainana ho an'izay voatendry miaina ny aina.
3:32 Fa ny mpisoronabe, mihevitra fa ny mpanjaka angamba mety miahiahy fa misy lolompo an'i Heliodora efa vita ny Jiosy, mahasoa nanolotra sorona ho an'ny ain-dralehilahy.
3:33 Ary ny mpisoronabe rehefa nivavaka, toy izany koa ny tanora, akanjo mitovy akanjo, dia nitsangana teo Heliodora, ka hoy izy:: "Misaora an'i Oniasa mpisorona, fa ho azy fa ny Tompo dia nanome ny fiainana ho anao.
3:34 Fa, rehefa nokapohiny Andriamanitra, tsy maintsy manambara ny zava-dehibe rehetra 'Andriamanitra sy ny heriny. "Ary rehefa nilaza izany, dia nanjavona.
3:35 Ary namono zavatra hatao fanatitra Heliodora ho an'Andriamanitra sy nanao voady lehibe ho an'izay efa namela azy ho velona. Dia nisaotra an'i Oniasa. Ary, nanangona ny miaramila, dia niverina ho any amin'ny mpanjaka.
3:36 Fa nijoro ho vavolombelona ny zava-drehetra momba ny asan'ny Andriamanitra lehibe, izay efa hita ny maso.
3:37 Ary noho izany, raha ny mpanjaka nanontany Heliodora toy ny amin'ny izay mety ho mendrika ny ho nalefa indray ho any Jerosalema, hoy izy::
3:38 "Raha misy fahavalo, na mpamadika ny fanjakana, handefa azy any, dia hiverina ho aminareo nokapohiny, mihitsy aza izy raha tratra. Fa marina tokoa, amin'izany toerana, misy anankiray herin'Andriamanitra.
3:39 Eny, izay manana ny fonenany any an-danitra dia ny vahiny sy ny mpiaro ny tompon-tany, ary mamely ka manimba izay tonga hanao ratsy. "
3:40 Dia toy izany no, ny zavatra momba Heliodora sy ny fiarovana ny fandatsahan-drakitra nitranga toy izany.
2 Makabeo 4
4:1 Fa ny voalaza etsy ambony Simon, izay ny mpamadika ny vola sy ny firenena, niteny ratsy momba Oniasa, toy ny hoe efa nitarika Heliodora mba hanao ireo zavatra ireo, ary toy ny hoe efa ny inciter ny ratsy.
4:2 Dia sahy milaza fa izy dia mpamadika ho an'ny fanjakana, na dia nanome ho an'ny tanàna, ary niaro ny vahoakany, ary fatra-pitana ny lalàn'Andriamanitra.
4:3 Fa raha ny fankahalana efa nanao toy izany hany ka na dia ny vonoan'olona no ataon'ny sasany mpiara-miasa akaiky amin'ny Simon,
4:4 Oniasa, fandinihana dia mampidi-doza ny fifandirana ity, sy Apolloniosa mba ho very saina, na dia no governoran'i Coelesyria sy Fenisia, izay ihany no augmented ny lolompo Simona, dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ny tenany,
4:5 tsy mba ho mpiampanga ny olom-pirenena, fa amin'ny jerena ny fiheverana ny amin'ny soa iombonan'ny vahoaka manontolo.
4:6 Satria hitany fa, tsy misy mpanjaka fitondran'Andriamanitra, Tsy ho vita ny hanome fiadanana ho fisehoan-javatra, ary tsy ho mandrakizay Simon hitsahatra amin'ny fahadalana.
4:7 Fa araka ny fiainan'i Séleucus niala aina, rehefa Antiochus, izay atao hoe malaza, Nihevitra ny fanjakana, Jason, ny rahalahin'i Oniasa, dia fatra-paniry laza ny fiandrianan'ny mpisorona lehibe.
4:8 Dia nankany amin'ny mpanjaka, nampanantena namany telon-jato sy talenta volafotsy enimpolo, ary avy amin'ny vola miditra hafa valo-polo talenta,
4:9 ary mihoatra noho ireo, Nampanantena koa izy amby zato sy dimam-polo more, raha ho nomena ny fahefana mba hanorina ny kianja fanatanjahan-tena, ary ny sekoly ho an'ny ankizilahy, ary mba hosoratana ireo izay tany Jerosalema toy ny Antiochians.
4:10 Ary nony efa nanaiky ny mpanjaka, ary efa nahazo ny mpitarika, avy hatrany izy nanomboka hamindra ny vahoakany ho amin'ny fombafomba ny jentilisa.
4:11 Ary ny fanesorana ireo zavatra izay efa napetraky ny mpanjaka, noho ny humanitarianism ny Jiosy, amin'ny alalan'ny John, ny rain'i Eupolemus, izay namorona ny finamanana sy ny fifanarahana tamin'i Romanina, dia afaka ny ara-drariny legislations, voiding ny fianianana ny olom-pirenena, ary voasazy ratsy fitondran-tena fomba amam-panao.
4:12 Fa na dia nanana ny sahy mba hanangana, eto ambany ny tena fiarovana mafy ho, ny fanatanjahan-tena kianja, ary ny daholo amin'ny tsara indrindra ao amin'ny brothels zazalahy tanora.
4:13 Ankehitriny dia izany no tsy am-piandohana, Fa nisy kosa fitomboana sy ny fivoarana ny mpanompo sampy sy ny fanao avy any ivelany, noho ny nefarious sy fahita mihitsy izany faharatsian 'ny ratsy fanahy tsy mpisorona Jason,
4:14 loatra ka Ary ny mpisorona dia tsy voatokana ny olana ny asa eo amin'ny alitara, fa, manamavo ny tempoly sy ny tsirambina ny fanatitra, faingana izy ireo mba ho lasa mpandray anjara amin'ny tolona sekoly, sy ny tsy rariny ny voarara, sy ny fampiofanana ny discus.
4:15 Ary, dia mihazona ny voninahitry ny razany ho na inona na inona, dia nanao ny voninahitry ny Grika ho tsara indrindra.
4:16 Noho ireo, dia nanao fifaninanana mampidi-doza, ary dia hanahaka ny fanao, ary noho izany, amin'ny zava-drehetra, Ary nangataka ny ho toy izany koa ireo izay efa fahavalony sy mpandrava.
4:17 Fa manao impiously manohitra ny lalàn'Andriamanitra dia tsy ho afa-maina, toy ireny zava-niseho manaraka hanehoana.
4:18 Fa rehefa ny fifaninanana izay ankalazaina isan-taona fahadimy tao Tyro, ny mpanjaka, rehefa tonga,
4:19 ny villainous Jason naniraka mpanota avy tany Jerosalema, mitondra telon-jato didrachmas volafotsy ho fanati-Hercules. Fa ireo izay nitatitra azy nangataka mba tsy nandoa ny fanatitra ho an'ny, satria tsy ilaina, fa azo ampiasaina amin'ny fandaniana hafa.
4:20 Noho izany, na dia izany no natolotry ny naniraka azy ho fanati-Hercules, dia kosa natolotra ny fanamboarana ny sambo mpiady grika, noho ireo fanolorana azy.
4:21 Ary Apolloniosa, ny zanak'i Menestheus, Nalefa ho any Ejipta noho ny manan-kaja amin'ny mpanjaka Philometor de Ptolémée. Antiochus Fa rehefa tonga saina fa efa olon-ko avy amim-pahombiazana ny raharahan 'ny fanjakana, kevitra ny tombontsoan'ny, dia nanomboka nivoaka avy teo izy ka tonga tany Jopa, dia niala tao nankany Jerosalema.
4:22 Ary Izy nandray Nahafinaritra ny amin'ny Jason sy ny tanàna, ary dia niditra tamin'ny jiro kely fanilo sy ny fiderana. Ary avy tao no niverina tamin'ny Fenisia, ny miaramilany tamin'ny.
4:23 Ary, rehefa afaka telo taona, Jason naniraka Menelasa, ny rahalahin'i Simona voalaza etsy ambony, mitondra vola tamin'ny mpanjaka, ary nitondra valin-kafatra mikasika ny raharaha tena ilaina.
4:24 ary, rehefa natolotry ny mpanjaka, rehefa voninahitra ny endriky ny heriny, Nandrombaka ny fiandrianan'ny mpisorona lehibe ho an'ny tenany, outbidding Jason telo talenta volafotsy zato.
4:25 Ary noho izany, rehefa nahazo baiko avy amin'ny mpanjaka, niverina, mitana na inona na inona mendrika ny fisoronana, amin'ny fahamarinana, manana ny fanahin'ny lozabe mpanao jadona sy mampirehitra ny fahatezeran-bibidia.
4:26 ary tokoa, Jason, izay efa babo ny rahalahiny, no tena voafitaka, ka noroahina ho lasa nandositra any amin'ny faritra taranak'i Amona,.
4:27 Ary Menelasa, tokoa, nahazo ny fanapahana, fa tena, ny momba ny vola izay efa nampanantenaina ny mpanjaka, na inona na inona natao. na dia Sostratis, izay voalohany eo amin'ny batery fiarovana, niezaka ny hanangona azy,
4:28 satria ny fanangonana ny hetra sasany dia momba izay azy. Izany no antony, dia samy nantsoina teo anatrehan'ny mpanjaka.
4:29 Ary Menelasa nesorina tamin'ny fisoronana, rehefa nahavita ny Lysimaque, rahalahiny. Ary Sostratus dia notendrena hitandrina ny Cyprians.
4:30 Ary raha izany zavatra izany no mitranga, nony fa ireo avy any Tarsosy sy Mallus nampirisika ny fikomiana, satria izy ireo dia nomena ho toy ny fanomezana ho Antiochidi, ny vaditsindranony 'ny mpanjaka.
4:31 Ary noho izany, ny mpanjaka ho avy haingana sy mampitony azy ireo, namela Andronika, ny mpiara-miasa iray, ho solombavambahoaka.
4:32 Ary Menelasa, mino fa efa tonga ny fotoana, rehefa halatra volamena sasany fanaka avy tao amin'ny tempoly, nomeny an'i Andronika, miaraka amin'ny olon-kafa dia efa azo tany Tyro sy manerana ny tanàna manodidina.
4:33 Ary nony efa tonga saina Oniasa marina izany amin'ny, dia niampanga azy, fitandremana-tena ao amin'ny toerana azo antoka tany Antiokia afa-tsy Daphne.
4:34 Mandritra izany fotoana izany, Menelasa nihaona tamin'ny Andronika, nangataka azy mba hampihatra Oniasa. Dia nankany amin'i Oniasa Dia, ka dia nomeny azy ny tanany havanana tamin'ny fianianana, ary, na dia efa niahiahy azy, dia nandresy lahatra azy mba sahy amin'ny fialokalofana, ary izy namono azy avy hatrany, tsy misy fanajana ny rariny.
4:35 Izany no antony, dia tsy ny Jiosy ihany, fa koa ny firenen-kafa, dia tezitra ka niteraka alahelo be hamonjy ny tsy marina famonoana lehibe toy izany ny olona.
4:36 Fa raha ny mpanjaka niverina avy tany amin'ny toeram-Kilikia, ny Jiosy tao Antiokia, ary toy izany koa ny Grika, nanatona izy, mitaraina noho ny famonoana ny iniquitous Oniasa.
4:37 Ary toy izany Antiokosa nalahelo tam-tsainy noho ny amin'i Oniasa, ary, rehefa nifindra tany amin'ny fangoraham-po, izy latsa-dranomaso, nahatsiahy ny fahononan-tena sy ny fahamaotinana ny maty.
4:38 Ary, rehefa harehitry in fanahy, dia nandidy ny volomparasy ho rovitra avy Andronika, ary, raha tonga nitondra manodidina, manerana ny tanàna manontolo, ary izay, ao amin 'ny amin'ilay efa nataony tamin'i Oniasa ny impiety, ny sacrilegious tokony omena ny olona teo amin'ny fiainany, araka ny sazy mety nadika hoe 'ny Tompo.
4:39 Fa nony sacrileges maro no nataon'ny Lysimaque ao amin'ny tempoly noho ny torohevitry ny Menelasa, ary ny vaovao nalazan'izy, ny vahoaka tafangona hamely Lysimaque, na dia be dia be ny volamena efa aondrana efa.
4:40 Fa ny vahoaka, raha nanangana fikomiana, ary ny sainy dia feno fahatezerana, Lysimaque fiadiana tokony ho telo arivo, izay nanomboka manao zavatra amin'ny tànan'ny ratsy. Nisy mpanao jadona no mpitondra azy ireo, olona nandroso na amin'ny taona sy ny fahaverezan-tsaina.
4:41 Fa rehefa fantatry ny andrana ny Lysimaque, ny sasany nihazona ny vato, ny hafa fikambanana mahery, ary, amin'ny fahamarinana, sasany nitoraka lavenona eo Lysimaque.
4:42 ary tokoa, vahoaka be no niampatrampatra, ary ny sasany dia namono; na izany aza, dia rehetra nataony vaky nandositra. Ary, Ary ny amin'ny lehilahy sacrilegious, dia novonoiny teo akaikin'ny trano firaketana.
4:43 Noho izany, momba ireo zavatra ireo, ny fitsarana nanomboka mitsangana hamely an'i Menelasa.
4:44 Ary raha ny mpanjaka efa tonga tao Tyro, telo lahy ireo iraka avy amin'ny anti-panahy mba hitondra ny Manan-danja Aminy.
4:45 Ary nony Menelasa fa resy, nilazany fa homeny vola be Ptolemea handresy lahatra ny mpanjaka.
4:46 Ary noho izany, Ptolémée dia nankao amin'ny mpanjaka tao amin'ny kianja anankiray ho any amin'izay nitoerany, toy ny hoe fotsiny mba hiahy azy izy, Ary vokany azy miala amin'ny teny.
4:47 Ary toy izany koa Menelasa, na dia meloka amin'izy rehetra tokoa lolompo, dia absolved ny heloka bevava. Koa, ireo lehilahy mahantra, izay, na dia efa niangavy ny raharaha teo anatrehan'i Skytianina, dia efa nitsara tsy manan-tsiny, no nanamelohany ho faty.
4:48 Noho izany, ireo izay nitondra ny raharaha amin'ny anaran'ny an-tanàna, ary ny olona, ary ny fanaka masina dia haingana nomena ny sazy tsy ara-drariny.
4:49 Izany no antony, dia ny Tyro, rehefa tezitra, hita ho tena liberaly manandrify ny fandevenana.
4:50 Dia toy izany no, noho ny fitiavan-karena 'ireo izay eo amin'ny fitondrana, Menelasa sisa manam-pahefana, Mitombo amin'ny lolompo, ny namadika ny olom-pirenena.
2 Makabeo 5
5:1 Mandritra izany fotoana izany, Antiokosa voaomana ho ny faharoa tany an Ejipta.
5:2 Ary nony, manerana ny tanànan'i Jerosalema manontolo, fa nisy hita, efa-polo andro, mpitaingin-tsoavaly miriotra amin'ny rivotra, manana akanjo volamena, ary nirongo lefona, toy ny andiana miaramila ny miaramila,
5:3 ary ny soavaly, nandahatra ny laharana, mihazakazaka, hiangonanareo ho anjara amin'ny ady akaiky, ary ny faninjitr'i ampinga, ary nisy vahoaka helmeted omban'ny aninjiranao sabatra, ary ny fanariana ny zana-tsipika, ary voninahitry ny fiadiana volamena, ary fiarovan-tratra isan-karazany.
5:4 Noho io, Niangavy ny rehetra fa prodigies ireo mba ho tonga soa.
5:5 Fa raha misy diso nivoaka tsaho, toy ny fiainan'i Antiokosa efa niala aina, Jason, nitondra tsy latsaky ny arivo ny olona, namely tampoka ny tanàna. Ary, na dia ny olom-pirenena haingana miaraka amin'ny rindrina, ny tanàna tamin'ny farany nalaina, ary Menelasa nandositra ho any amin'ny batery fiarovana.
5:6 Marina tokoa, Jason tsy niaro ny olom-pirenena avy namono; tsy fantany fa ny fahombiazana amin'ny lany havany dia lehibe dia lehibe ny ratsy, Nihevitra izy ireo noho izay mpandresy ho fahavalo, fa tsy olom-pirenena.
5:7 Ary noho izany, Azo antoka fa tsy hahazo ny mpitarika, fa tena, amin'ny farany, nahazo fifanjevoana noho ny famadihana, ary dia niala ka lasa indray mba hialoka tany amin'ny taranak'i Amona.
5:8 Amin'ny farany, amin'ny vatany nianjera, dia fonosina ny Aretas, ny mpanjaka ny Arabo. Ary avy eo, nandositra ny tanàna, halan'ny olona rehetra ho toy ny zava-maharikoriko mpandositra avy amin'ny lalàna, ary ho toy ny fahavalo ny ny firenena sy ny olom-pirenena, dia noroahina tany Egypta.
5:9 Ary izay efa voaroaka maro amin'ny tany nahaterahany maty any ivelany, manomboka mivoaka hankany amin'ny Lacedaemonians, toy ny hoe, noho notsinontsinoaviny ny maha mpihavana, dia tokony hanana fialofana any.
5:10 Ary izay namoaka maro, unburied, dia ny tenany ihany koa ny namoaka, na unlamented sy unburied, ary raha tsy manana na mampiasa fandevenana vahiny, na anjara ao amin'ny fasan-drazany.
5:11 Ary noho izany, rehefa vita izany rehetra izany, ahiahiana ny mpanjaka fa ny Jiosy dia handao ny fifanarahana. Ary noho izany, niala avy tany Egypta tamin'ny tezitra fanahy, izy tokoa nahafaka ny tanàna an-keriny.
5:12 Koa, dia nanome baiko ny miaramila mba hampihatra, fa tsy ho antra, na iza na iza izy ireo nihaona, ary niakatra ny alalan 'ny trano ho hamono.
5:13 Noho izany, ny vono olona nitranga ny tanora sy ny anti-panahy, fandringanana ny zaza amam-behivavy, ny famonoana ny virjiny sy ny zaza amim-behivavy.
5:14 Ary noho izany, ny telo andro manontolo, valo alina no novonoina ho faty, efatra alina no naiditra am-ponja, ary tsy vitsy no lafo.
5:15 Fa, toy ny hoe tsy ampy izany, heverina mihitsy aza izy hiditra ao amin'ny tempoly masina indrindra eto amin'izao tontolo izao, amin'i Menelasa, fa mpamadika ny lalàna sy any an-firenena, toy ny mpitari-dalana.
5:16 Ary, nitondra ny tanan'ny olona ny fanaka masina, izay anjara mpanjaka sy tanàna hafa ho an'ny ny haingo sy ny voninahitry ny toerana, ampiasaina amin'ny fanahy tsy mendrika izy, ary voaloto azy ireo.
5:17 Ary Antiokosa, nandeha lalan-diso ao an-tsaina, Tsy hihevitra fa, noho ny heloky ny mponina tao an-tanàna, Andriamanitra efa ho tezitra mandritra ny fotoana fohy, ary noho izany, izany no antony, fanamavoana efa nahazo ny toerana.
5:18 Raha tsy izany, raha tsy nitranga fa nandray anjara tamin'ny fahotana maro, toy ny Heliodora, izay nirahin'ny mpanjaka Séleucus mba handroba ny rakitry ny tempoly, toy izany koa ity iray ity, raha vao tonga, Azo antoka fa mety ho nokapohina sy noroahina niala tamin'ny sahy.
5:19 Marina tokoa, Andriamanitra tsy nifidy ny olona noho ny toerana, fa ny toerana noho ny olona.
5:20 ary noho izany, ny toerana mihitsy koa lasa mpandray anjara ao ny ratsy 'ny olona. Fa rehefa afaka izany,, dia ho namana amin'ny tsara. Dia izay nandao ny fisafoahan 'Andriamanitra Tsitoha no hasandratra indray amin'ny voninahitra lehibe indrindra, amin'ny fampihavanana 'ny Tompo lehibe.
5:21 Noho izany, rehefa Antiochus efa nesorina avy tao amin'ny tempoly valo arivo talenta zato, haingana izy niverina tany Antiokia, mieritreritra, in ny fiavonavonany, mba hitety ny tany, na amin'ny alalan'ny fitadiavana ny andalan-teny misokatra mankany manerana ny ranomasimbe: izany dia ny hafaliana ny saina.
5:22 Nefa namela mpanapaka hampahory ny vahoaka. Raha ny tena izy, tany Jerosalema, Filipo dia avy teraka ny Frijianina, fa izy tany fomba lozabe kokoa noho izay nanao fotoana taminy ireo.
5:23 Kanefa Androniko sy Menelasa nihantona ny lanjan'ny mavesatra eo amin'ny olom-pirenena ao amin'ny Garizim noho ny olon-kafa.
5:24 Ary rehefa efa notendrena hitandrina ny Jiosy, dia naniraka fa feno fankahalana mpitarika, Apolloniosa, nitondra miaramila roa arivo amby roa-, mampianatra azy mba hamono ny olon-drehetra tao amin'ny voalohany amin'ny fiainana, ary ny hivarotra ny vehivavy sy ny tanora.
5:25 Ary rehefa tonga tany Jerosalema, feigning fiadanana, dia nitsahatra ihany mandra-pahatongan'ny andro masina ny Sabata. Ary avy eo, raha ny Jiosy fialan-tsasatra, dia toromarika ny handray fitaovam-piadiana.
5:26 Ary namono izay rehetra izay hita nivoaka. Ary nihazakazaka nanerana ny tanàna miaraka amin'ny olona efa voaomana hiady, fa nandringana ny vahoaka be.
5:27 Ary Jodasa Makabeo, izay ny fahafolo, niala ny tenany amin'ny efitra toerana, ary tao no niaina fiainana amin'ny bibidia eny an-tendrombohitra, amin'ny ny. Dia nitoetra tany, mandany ahitra toy ny sakafo, fandrao ho tonga mpandray anjara ao amin'ny fahalotoana.
2 Makabeo 6
6:1 Fa tsy ny fotoana taty aoriana, ny mpanjaka naniraka anankiray anti-panahy avy any Antiokia, izay nanery ny Jiosy mba hamindra ny tenany avy ny lalàn 'Andriamanitra sy ny razany,
6:2 ary koa mba handoto ny tempoly tany Jerosalema, ary ny anarana azy io 'Jupiter ny Olympus,'Ary in Garizim, 'Jupiter ny Tia Mandray Vahiny,'Tena toy izay nonina tany amin'ny toerana.
6:3 Na izany aza ny ratsy indrindra sy mafy indrindra zavatra rehetra no onrush ny ratsy.
6:4 Fa ny tempoly dia feno ny haitraitra sy ny carousings 'ny Jentilisa, ary ny niaraka tamin'ireo vehivavy promiscuous. Ary ny vehivavy ny tenany irery ihany faingana ho any an-trano masina, nitondra zavatra izay tsy mety.
6:5 Ary na dia ny alitara dia feno zavatra tsy ara-dalàna, izay voararan'ny lalàna.
6:6 Ary koa, ny Sabata dia tsy nitandrina, sy ny fotoam-pivavahanareo ny ray dia tsy mankatò, sady tsy misy olona manaiky fotsiny ny tenany ho Jiosy.
6:7 Ary noho izany, izy ireo nitondra ny mangidy tsy maintsy, ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i 'ny mpanjaka, ny sorona. Ary, ny fitoerana masina, dia nankalaza ny Liber, izy ireo dia voatery mandeha manodidina satroboninahitra ny Ivy ny Liber.
6:8 Avy eo dia nisy didy nivoaka nankany amin'ny tanàna any amin'ny tany manodidina jentilisa, Nanolo-kevitra ny Ptolemeans, fa izy ireo koa dia tokony hanao zavatra Toy izany koa hamely ny Jiosy, ny manery azy ireo hanao sorona,
6:9 ary ireo izay tsy vonona ny hanaraka ny andrim-panjakana ny ahatongavan'ny jentilisa ho faty. Noho izany, nisy fahoriana mba ho hita.
6:10 Fa Niampanga vehivavy roa ireo noho izy nanana ny lahy voafora. Ireo, miaraka amin'ny zazakely mihantona amin'ny amin'ny tratrany, rehefa nitondra azy ireo ampahibemaso manodidina ny tanàna, Nazerany avy izy ireo ny manda.
6:11 Marina tokoa, ny hafa, miara-mivory tsy lavitra teo lavaka sy hankalaza ny andro Sabata mangingina, rehefa hita ny Filipo, nodorana tamin'ny afo, satria naneho fanajana ny fety ny fivavahana, nanapa-kevitra ny hanampy ny tenany manokana araka ny tanany.
6:12 Koa dia, I mangataka ireo izay mamaky ity boky, aoka tsy ho hampandositra ireny voka zava-niseho, fa aoka hodinihintsika fa izany dia nanjo, tsy ny fandringanana, fa ho amin'ny fanitsiana, ny olona.
6:13 Fa izany ihany koa ny famantarana ny soa lehibe fa ny mpanota dia tsy navela hanohy teo amin'ny lalany ireny nandritra ny fotoana ela, fa avy hatrany dia nentina tany sazy.
6:14 Fa, tahaka ny hafa firenena, (izay tian'i Jehovah amim-paharetana miandry, amin'izay mba, rehefa amin'ny andro fitsarana dia ho tonga, mba hamaly azy ireo araka ny plentitude ny fahotany,)
6:15 tsy mba toy izany no kosa dia hamely amintsika, toy ny hoe mba esory ny fahotantsika hatramin'ny farany, mba hanasaziana antsika ho azy ireo farany.
6:16 Noho io, Azo antoka fa tsy hanaisotra ny famindram-pony amintsika. Na izany aza tena, famaizana ny vahoakany amin'ny fahoriana, tsy mahafoy azy ireo.
6:17 Fa ireo zavatra vitsivitsy efa notenenin 'izahay ho fampahatsiahivana ho an'ny mpamaky. Fa ankehitriny dia efa tonga teo amin'ny fitantarana.
6:18 Ary noho izany, Eleazara, iray amin'ireo lohan'ny mpanora-dalàna, nisy lehilahy nandroso taona, ary ny tarehy tarehy, dia voaterin'ny teny hiloa-bava malalaka mba handevona ny nofo ny kisoa.
6:19 Nefa izy, manaiky ny fahafatesana be voninahitra indrindra ho lehibe noho ny zava-maharikoriko amin'ny fiainana, nandroso an-tsitrapo amin'ny fijaliana.
6:20 Ary noho izany, nieritreritra ny fomba izay dia tokony hanatona azy, miaritra amim-paharetana, dia tapa-kevitra ny tsy hamela, noho ny fitiavana ny fiainana, misy zavatra tsy ara-dalàna.
6:21 Nefa izay nijanona teo akaiky, rehefa nifindra iray iniquitous ela fo noho ny fisakaizana amin-dralehilahy, nitondra azy nitokana tao amin'ny mangingina, nangataka ny nofo ho entina izay mety ho azy hihinan, mba hahafahany mody nihinana, tahaka ny mpanjaka efa nandidy, avy amin'ny henan'ny fanatitra.
6:22 Koa dia, raha manao izany, mba ho afaka amin'ny fahafatesana. Ary izany dia noho ny taloha fisakaizana amin'izao lehilahy io dia vitany soa ho azy.
6:23 Fa izy vao mandinika ny fijangajangana fahamendrehan'ny ny sehatra ny fiainana sy ny fahanterana, ary ny voajanahary voninahitra ny fotsy volo, ary koa ny fakan-tahaka teny sy ny atao hatramin'ny mbola kely. Ary izy namaly avy hatrany, koa, araka ny fitsipiky ny lalàna masina voaro avy amin'Andriamanitra, nanao hoe:, fa aloha halefa any amin'ny ambanin'ny.
6:24 "Fa tsy mendrika ho an'ireo ny taona," hoy izy, "Hamitaka, mba tanora maro mety hieritreritra fa Eleazara, amin'ny sivi-folo taona, efa niova fo ho amin'ny fiainana ny hafa firenena.
6:25 Ary noho izany, izy ireo, noho ny fihatsaram-belatsihy sy noho ny fotoana fohy ny fiainana lo, dia manaiky ho voafitaka ianareo, ary, ny alalan 'izany tasy sy fanimbazimbana, Aho handotoany ny farany taona.
6:26 Fa raha, amin'ny 'izao fotoana izao, Aho, dia voavonjy avy tamin'ny fampahoriana ny olona, Aho dia tsy ho afa-mandositra ny tanan'ny Tsitoha, na eo amin'ny fiainana, na amin'ny fahafatesana.
6:27 Izany no antony, niala ny fiainana amin'ny herimpo, Hasehoko mazava tsara ny tenako mba ho mendrika ny ho ela velona.
6:28 Ary noho izany, Dia lovan'izay ohatra ny herimpo ny tanora, raha, amin'ny fanahy sy vonona mandrakariva, I hanatanteraka marina ny fahafatesana, noho ny lehibe indrindra sy masina indrindra lalàna. "Ary rehefa nilaza izany, izy avy hatrany nitaritarika ho any faty.
6:29 Fa ireo izay nitondra azy, ary izay kely malefaka kokoa eo anatrehan'ny, dia niverina ho tezitra noho ny teny nolazain 'izy, izay heverina ho efa navoaka tamin'ny fomba fireharehana.
6:30 Ary rehefa ho efa ho faty noho ny ho fanindronana, dia vonto, ka hoy Izy:: "Tompo ô, izay mihazona ny fahalalana masina rehetra, anao mazava tsara fa, na dia mety ho afaka amin'ny fahafatesana, Mijaly mafy aho fanaintainana amin'ny vatana. Marina tokoa, araka ny fanahy, I-tsitrapo hiaritra izany zavatra izany, noho ny fahatahorana. "
6:31 Ary ny fomba izay nahatonga izao olona nandroso avy amin'ity fiainana ity, kevi-baovao napetraky, tsy ny tanora, fa ny fikasana koa ny olona manontolo, ny fahatsiarovana ny fahafatesany ho toy ny ohatry ny hatsaran-toetra sy ny herimpo.
2 Makabeo 7
7:1 Ary rehefa koa ny rahalahy fito, miray amin'ny reniny, dia nosamboriny ka nanery ny mpanjaka hihinana ny nofon'ny kisoa manohitra ny lalàn'Andriamanitra, rehefa hampijalina amin'ny fanindronana sy ny karavasy.
7:2 Fa ny iray tamin'izy ireo, izay voalohany, niteny toy izany: "Inona no manontany, na inona no tianareo hianarana avy amintsika? Izahay efa ho faty, fa tsy ny hamadika ny lalàna fa ny razanay nandray avy amin'Andriamanitra. "
7:3 Ary toy izany ny mpanjaka, rehefa tezitra, baiko vilany fandrahoana lapoaly sy vilany varahina ho tezitra. Rehefa ankehitriny izao no tezitra,
7:4 dia nandidy ny lelany 'Ilay efa niteny aloha mba ho ringana, ary, indray mandeha ny hoditry ny lohany efa voaongotra, toy izany koa ny tanany sy ny tongony mba ho ringana amin'ny an-tampon'ny, raha ny sisa ny rahalahiny sy ny reniny nizaha taratra.
7:5 Ary ankehitriny nony efa natao tsy afa-manoatra amin'ny faritra rehetra, izay nandidiany azy mba ho voatosika ho any amin'ny afo, ary, raha mbola miaina, ho nendasina teo amin'ny lapoaly. Rehefa nijaly izy fijaliana lava ao, ny ambiny, tafaray amin'ny reniny, Nampirisika ny hafa mba hiara-maty herimpo,
7:6 nanao hoe:: "Ny Tompo Andriamanitra no hahita ny fahamarinana, dia ho nampionona ao amintsika, teny an-dalana izay Mosesy dia nilaza tao amin'ny asa ny canticle: 'Ary ny mpanompony, dia ho nampionona. ' "
7:7 Ary noho izany, rehefa maty ny voalohany tamin'izany fomba izany, izy ireo nitondra tany amin'ny manaraka, mba haneso azy. Ary raha ny hoditry ny lohany voaongotra tamin'ny volon, izy ireo nanontany azy raha toa ka hihinana, fa tsy ho voasazy nandritra ny tenany rehetra amin'ny rantsambatana rehetra.
7:8 Fa namaly ao ny fitenin 'ny razany, hoy izy:, "Tsy mba hanao izany." Noho izany, izy koa, ao amin'ny toerana manaraka, nandray ny fijaliana 'ny voalohany.
7:9 Ary rehefa tonga ny aina, dia niteny toy izany: "ianao, tokoa, Ry ilay ratsy fanahy, dia manimba antsika eto amin'ity fiainana ankehitriny. Fa ny Mpanjakan'ny izao tontolo izao dia hanangana antsika, ao amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fitsanganana amin'ny maty, fa ho faty ho an'ny lalàny. "
7:10 Rehefa afaka izany, iray, ny fahatelo dia naneso, ary rehefa nanontaniana, dia haingana nanolotra ny lelany, ary tapa-kevitra ny nanitatra ny tànany.
7:11 Ary hoy izy amim-pahatokiana, "I manana izany avy any an-danitra, fa, noho ny lalàn 'Andriamanitra, Tsinontsinona azy aho izao, fa manantena ny handray azy ireo indray avy aminy. "
7:12 Koa dia, ny mpanjaka sy ireo izay niaraka taminy, gaga ny fanahin'ny tanora ity, satria nandinika ny fijaliana toy ny hoe izy ireo na inona na inona.
7:13 Ary rehefa maty toy izany, nampahoriany ny fahefatra toy izany koa fampijaliana.
7:14 Ary nony efa ho faty, dia niteny toy izany: "Tsy aleo, ka novonoina ny olona, mba hiandry ny fanantenana avy amin'Andriamanitra, mba ho velona indray izy indray. Fa ny fitsanganana amin'ny maty ho amin'ny fiainana dia tsy ho ho anao.
7:15 Ary rehefa nampiantsona ny fahadimy, nampahoriany azy. fa, nandinika azy,
7:16 nanao hoe:: "Manana hery ny olona, na lo ianao, manao izay tianao, fa aza mieritreritra fa ny firenenay efa nafoin'Andriamanitra.
7:17 Ary noho izany, miandry amim-paharetana nandritra ny fotoana kelikely, ary ho hitanareo ny heriny lehibe, ny fomba izay hataony mampijaly anao sy ny taranakao. "
7:18 Rehefa afaka izany, iray, dia nentiny ny fahenina, ary izy, efa tokony ho faty, niteny toy izany: "Aza mania ho amin'ny zava-poana. Fa isika mijaly noho ny tenantsika, rehefa nanota ny Andriamanitsika, nefa zavatra tokony fankasitrahana no tanteraka ao amintsika.
7:19 Fa aza mihevitra fa ianao dia ho afa-potsiny, fa efa nanandrana hiady amin'Andriamanitra. "
7:20 Ary ny reniny dia mahagaga tafahoatra, ary ho mendrika fahatsiarovana ny tsara, fa izy dia nijery ireo zanany fito mirahalahy ho faty ao anatin'ny fotoana indray andro, dia niteraka azy amin'ny tsara fanahy, noho ny fanantenana izay nananany an'Andriamanitra.
7:21 Ary, amin'ny herimpo, Nampirisika ny rehetra izy ny iray tamin'izy ireo, ao ny fitenin 'ny ray, sady feno fahendrena. Ary, manatevin-daharana iombonana amin'ny herim-po amin'ny fisainana tsy ampy,
7:22 dia hoy izy taminy: "Tsy fantatro hoe ahoana no mbola noforoniko tany an-kiboko. Fa tsy hanome anao ny fanahy, na fanahy, na fiainana; izaho tsy hanorina tsirairay ny tongotra.
7:23 Na dia izany aza, ny Mpahary izao tontolo izao, izay namorona ny nahaterahany ny olona, ary izay nanorina ny am-boalohany ny rehetra, hampodiko dia ny anjely sy ny fiainana ho anao indray, amin'ny ny famindram-pony, tahaka ny tsinontsinona ny tenanareo ankehitriny noho ny lalàna. "
7:24 Fa Antiokosa, tsiratsiraina izy, ary miaraka amin'izay koa, tsinontsinona koa ny feon 'ny reproacher, raha afa-tsy ny faralahy mbola sisa, tsy vitan'ny hoe namporisika azy tamin'ny teny, Nanome toky azy fa koa tamin'ny fianianana, fa hataony mpanan-karena sy sambatra, ary, raha mety hiova avy amin'ny lalàna ny razany, naniry azy ho toy ny namana, ary izy hanome azy amin'ny zavatra ilaina.
7:25 Fa, rehefa ny tanora dia tsy hanaraka ny ataon'ny izany, ny mpanjaka nampaka ny reny sy nandresy lahatra azy hanao zavatra eo amin'ny tanora mba hamonjy azy.
7:26 Ary noho izany, rehefa namporisika azy tamin'ny teny maro, Nampanantena izy fa izy no torohevitra ny zanany.
7:27 Avy eo, mitongilana mankany aminy sy maneso ny masiaka, Hoy izy ny fitenin 'ny ray: "Ny zanako lahy, mamindrà fo amiko, Fa nitondra anao sivy volana tao an-kiboko, ary nomeko anao ronono nandritra ny telo taona, ary nitaiza anao aho ka nitondra anao tany ho any izany dingana ny fiainana.
7:28 Manontany anao aho, ankizy, faly mijery ny lanitra sy ny tany, sy izay rehetra ao aminy, sy hahatakatra fa Andriamanitra dia nahary azy ho, sy ny fianakaviana ny olona, avy amin'ny tsy misy.
7:29 Dia tahaka izany no hatao fa tsy hatahotra mpiambina ity, fa, fandraisana anjara amim-pahamendrehana ihany ny rahalahinao, dia hanaiky ny ho faty, amin'izay mba, amin'ny alalan'ny famindram-po ity, Izaho dia handray anareo indray amin'ny rahalahinareo. "
7:30 Raha izy mbola nilaza izany, Hoy ny tanora: "Inona no miandry? Izaho tsy hankatò ny didin'ny mpanjaka, fa ny didy ny lalàna, izay nomena antsika tamin'ny alalan'i Mosesy.
7:31 Raha ny marina, ianao, izay efa ny mpamorona ny lolompo rehetra manohitra ny Hebreo, dia tsy ho afa-mandositra ny tanan 'Andriamanitra.
7:32 Fa niaritra izany noho ny fahotanay.
7:33 ary raha, noho ny famaizana sy fanitsiana, Jehovah Andriamanitsika dia tezitra aminay vetivety foana, nefa dia mbola hihavana amin'ny mpanompony indray.
7:34 Fa ny aminareo, Ry ilay ratsy, ary manala baraka indrindra ny olon-drehetra, aza dia tsy ho Nidera ny na inona na inona, amin'ny fanantenana foana, raha ianareo harehitry hamely ny mpanompony.
7:35 Fa ianareo tsy mbola afa-nandositra ny fitsaran'Andriamanitra Andriamanitra Mahery Indrindra, Izay mandinika ny zava-drehetra.
7:36 Noho izany, ry rahalahy, manana alahelo ankehitriny Nanohana fohy, efa nampidirina ambanin'ny fanekena ny fiainana mandrakizay. Fa, amin'ny fahamarinana, ianao, araka ny fitsaran'Andriamanitra, dia navoaka any fotsiny sazy noho ny fiavonavonany.
7:37 Fa Izaho, tahaka ny rahalahiko, vonjeo ny fanahiko ary ny tenako, noho ny ny lalàn 'ny ray, miantso an 'Andriamanitra mba hitondra famelan-keloka amin' ny firenentsika haingana, ary mba, amin'ny fijaliana sy ny lashings, Mety manaiky fa izy irery no Andriamanitra.
7:38 Marina tokoa, ao amiko sy amin'ny rahalahiko, ny fahatezeran'ny Tsitoha, izay efa nitondra ny vahoakany rehetra araka ny rariny, dia hitsahatra. "
7:39 Ary ny mpanjaka, mirehitra amin'ny fahatezerany, nisian'ny hamely ity iray ity amin'ny habibiana mihoatra noho ny sisa rehetra, mitondra azy Sady tezitra ny tenany dia naneso.
7:40 Ary toy izany koa ity iray ity koa dia maty tany fahadiovana, matoky ao amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny zava-drehetra.
7:41 Avy eo, farany amin'ny rehetra, araka ny zanany, ny reny dia levona koa.
7:42 Noho izany, momba ny fanatitra sy ny habibiana lehibe izaitsizy tokoa, ampy voalaza hoe:.
2 Makabeo 8
8:1 Raha ny marina, Jodasy Makabeo, sy ireo izay niaraka taminy, niditra mangingina tao an-tanàna, ary, hiara-miantso ny havany sy ny namany, sy ny fanekena eo aminy ireo izay naharitra tamin'ny fivavahan'ny Jiosy, dia nentiny niara-enina arivo sy iray alina.
8:2 Ary niantso ny Tompo: mba hijery ny vahoakany, izay nidina voahosihosy rehetra; ary handray mamindra fo amin'ny tempoly, izay maloto amim-impius;
8:3 ary na dia ny hitondra mamindra fo ny tanàna amin'ny alalan'ny fandringanana tanteraka, satria efa vonona ny ho rava tanteraka avy hatrany tamin'ny tany; ary naniry handre ny feon 'ny ra izay mitaraina aminy,
8:4 ka mba tsarovy ihany koa indrindra iniquitous fahafatesan'ireo ny tsy manan-tsiny madinika, ary ny fitenenan-dratsy nitondra ny anarany; ary mba hanehoany ny fahatezerany izany zavatra izany.
8:5 Ary dia Makabeo, rehefa tafangona ny vahoaka, nefa tsy nanohitra 'ny Jentilisa. Fa ny fahatezeran'i Jehovah efa niova ho famindram-po.
8:6 Ary noho izany, dia feno ny tanàna sy tanàna tsy nampoizina, dia nametraka azy tamin'ny afo. Ary, fibodoana toerana stratejika, nanao kely tsy nandresy ny fahavalo.
8:7 Koa, indrindra fa ao amin'ny alina, navoakan'i Nebokadnezara avy fanafihana toy izany. Ary ny lazan'izany ny tsara toetra hery dia niely na aiza na aiza.
8:8 Ary Filipo, nahita fa ny olona nahazo tany tsikelikely, ary matetika ny zavatra latsaka ao ny fankasitrahany, nanoratra ho Ptolémée, governora any Coelesyria sy Fenisia, handefa mpanampy mba hanatanteraka ny asan 'ny mpanjaka.
8:9 Ary noho izany, haingana izy naniraka Nikanora, zanak'i patroclus, amin'ny lehibe indrindra namany, manome azy tsy misy latsaka ny roa alina ny lehilahy mitam-piadiana avy amin'ny manerana ny Jentilisa, handripaka ny hazakazaka manontolo ny Jiosy, nandray anjara aminy Gorjiasa, miaramila lehilahy traikefa lehibe indrindra amin'ny zavatra ny ady.
8:10 Koa, Nanapa-kevitra ny hanangana Nikanora hetra ho an'ny mpanjakan'ny talenta roa arivo, izay homena ho an'ny Romanina, ary izay mety ho nanome, amin'ny alalan'ny avy amin'ny fahababoana ny Jiosy.
8:11 Ary niaraka tamin'izay dia naniraka tany amin'ny tanàna dranomasina, miantso azy ireo amin'ny lavanty ny andevo jiosy, nampanantena azy ireo ny fonosana amby sivi-folo andevo iray talenta, Tsy nieritreritra ny famaliana izay mety hanjo azy taty aoriana avy amin'ny Tsitoha.
8:12 Avy eo, Jodasy, rehefa fantany fa efa akaiky Nikanora, dia nanambara izany tamin'ny Jiosy izay niaraka taminy.
8:13 Ary ny sasany teo aminy, raha matahotra fa tsy matoky ny fahamarinan 'Andriamanitra, nihodina ka nandositra.
8:14 Raha ny marina, ny sasany nivarotra izay rehetra tao be loatra, ary niara-nivavaka tamin'ny Tompo, fa hanafaka azy avy any amin'ny ratsy fanahy Nikanora, izay efa nivarotra azy fony izy tsy mbola nanatona azy ireo mihitsy aza,
8:15 ary raha tsy Izy noho ny amin'ireo, Ary noho ny fanekena izay nataony tamin'ny razany, ary noho ny fiantsoana ny anarany masina sy ny asa lehibe azy.
8:16 fa Makabeo, miara-miantso fito arivo izay niaraka taminy, nangataka azy ireo tsy mba hihavana ny fahavalo, ka tsy hatahotra ny vahoaka ny fahavalonao, izay tonga hamely azy tsy ara-drariny, fa miady amin'ny herimpo,
8:17 mitana eo imasony ny fanamavoana izay nampidirina teo amin'ny fitoerana masina amin'ny alalan'ny azy ireo, ary mba toy izany koa ny fanesoana izay nohazoniny ho amin'ny ratsy ny tanàna, na dia ny halehiben'ny horavako ny andrim-panjakana fahiny.
8:18 Fa hoy izy fa ireo, tokoa, matoky ny fitaovam-piadiana, ary koa ao amin'ny fahasahiana; Fa matoky ao amin'ny Tompo Tsitoha, iza moa no mahay handripaka na izay avy hamely anay, ary na dia izao tontolo izao, amin'ny iray mihatohatoka.
8:19 Koa, dia nampahatsiahy azy ireo koa ny fanampiana avy amin'Andriamanitra, izay ray aman-dreniny efa nahazo; ary ahoana no, notarihin'i Sankeriba,, zato sy valo arivo dimy efa maty;
8:20 sy ny ady amin'ny azy ireo, izay manohitra ny Galatianina in Babylonia, Ahoana, rehefa tonga ny hetsika sy ny mpiara ny Makedonianina nisalasala, na izy ireo ihany no enina arivo rehetra, nefa nahafaty amby zato sy roa alina, noho ny fanampiana nomena azy ireo tany an-danitra; ary ahoana no, noho izany zavatra izany, be soa be dia be no nanaraka.
8:21 By ireo teny ireo, dia nentina tany tapaka ka vonona ny ho faty noho ny lalàna sy ny firenena.
8:22 Ary noho izany, dia notendreny ny rahalahiny ho mpitarika ny fizarana tsirairay: Simon, ary Joseph, ary Jonathan, nifehy ny arivo sy diman-jato lahy ho isan-olona izany.
8:23 Ary amin'izay fotoana izay dia, masina rehefa mamaky boky ho azy ireo Esdrasa, Ary rehefa nanome famantarana ny fanampiana avy amin'Andriamanitra, miaraka aminy izay nitarika ny teboka voalohany, dia nilahatra hiady amin'ireo Nikanora.
8:24 Ary, amin'ny hevitry ny Tsitoha ho toy ny mpanampy, dia novonoiny ny sivy arivo sy iray alina. Koa, rehefa naratra ary kilemaina ny ampahany lehibe ny miaramilan 'Nikanora, dia nanery azy ireo handray nandositra.
8:25 Raha ny tena izy, dia naka ny vola izay tonga hividy azy ireo, sady nanenjika azy na aiza na aiza.
8:26 Anefa izy ireo tamin'izany dia niverina ny akaiky ny ora, satria efa talohan'ny Sabata. Izany no antony, tsy hanohy ny fanenjehana.
8:27 Fa, rehefa namory ny fitaovam-piadiana sy ny babo, dia nitandrina ny Sabata, mitso-drano ny Tompo Izay efa namonjy azy tamin'izany andro izany, handrotsaka ny fiandohan'ny famindram-po aminy.
8:28 Raha ny marina, araka ny Sabata, dia nizara ny babo ho an'ny sembana, ary ny kamboty, ary ny mpitondratena, ary ny sisa dia foana ho azy sy ny.
8:29 Ary noho izany, rehefa vita izany rehetra izany, sy fifonana natao rehetra iombonana, izy ireo nanontany ny Tompo feno famindram-po mba aoka hody amin'ny mpanompony hatramin'ny farany.
8:30 Ary, eo anivon 'ireo izay miady azy Timoty sy Bakidesa, dia novonoiny mihoatra ny roa alina, ary nahazo trano mimanda avo, ka dia nizara babo maro, manao anjara mitovy ho an'ny sembana, ny kamboty, ary ny mpitondratena, ary na dia ny antitra.
8:31 Ary rehefa nanangona tsara ny fitaovam-piadiana, dia napetrany azy rehetra amin'ny toerana stratejika, ary, amin'ny fahamarinana, ny sisa amin 'ny babo nentiny ho any Jerosalema.
8:32 Ary novonoina ho faty Philarches, ratsy fanahy, izay niaraka Timoty, izay nitondra fahoriana maro amin 'ny Jiosy.
8:33 Ary rehefa nankalaza ny hiran'ny fandresena tany Jerosalema, dia nandoro azy izay nandoro ny varavarana masina, izany hoe, Callisthenes, rehefa nialoka trano iray, mamaly azy ho valisoa mendrika ho an'ny impieties.
8:34 Fa ny tena masiaka Nikanora, Izay efa nitondra in arivo mpandranto ho ny fivarotana ny Jiosy,
8:35 Reraka izy miaraka amin'ny fanampian'ny Tompo, ary ireo izay heverina ho tsy misy ilana azy. Fanaovana niala ny fitafiana be voninahitra, nandositra iray any afovoan-tany lalana, dia tonga tany Antiokia irery, rehefa nentina ho any amin'ny tsy fahasambarana lehibe indrindra noho ny fandringanana ny tafika.
8:36 Ary izay haloa hetra ho an'ny Romanina avy babo avy any Jerosalema, ankehitriny dia nilaza fa ny Jiosy dia nanana an'Andriamanitra ho mpiaro, ary, izany no antony, izy ireo invulnerable, satria nanaraka ny lalàna naorin'ny azy.
2 Makabeo 9
9:1 Mandritra izany fotoana izany, Antiokosa niverina amin'ny fahafaham-boninahitra avy any Persia.
9:2 Fa efa niditra tao an-tanàna atao hoe Persepolis, dia nanandrana ny handroba ny tempoly, ary hampahory ny tanàna, fa ny vahoaka, miriotra ho fitaovam-piadiana, nitodika azy ireo nandositra, ary dia toy izany no nitranga fa Antiokosa, rehefa avy nandositra, niverina in afa-baraka.
9:3 Ary rehefa tonga akaiky Ekbatana, fantany ny zava-nitranga tamin'i Nikanora sy Timoty.
9:4 Ary noho izany, eny, nifoha-katezerana, izy no efa nokasainy miverina amin 'ny Jiosy ny ratra natao' ireo izay efa nanao azy ho vaky nandositra. Ary, noho izany, dia nanome baiko tamin'ny kalesy ho voaroaka tsy nijanona teny an-dalana, ho amin'ny fitsarana amin'ilay any an-danitra dia nampirisika azy ho any amin'ny, satria efa niteny izany nirehareha momba ny ho avy tany Jerosalema ka hanao izany ho fasana ho an'ny Jiosy.
9:5 Fa Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,, izay miandraikitra ny zava-drehetra, namely azy tamin'ny tsy azo sitranina sy tsy hita maso loza. Fa, raha vao vitan'i izany teny izany, tsarotra ny fanaintainana amin'ny kibony nisambotra azy, amin'ny fijaliana mangidy anatiny.
9:6 Ary, tokoa, dia niseho mivoaka ny rariny, satria efa mijaly loatra ny anatiny taova hafa amin'ny maro hafa firenena sy ny fampijaliana vaovao, nefa tsy ho nitsahatra tamin'ny lolompo.
9:7 Fa, mihoatra noho izany, ka dia feno ny fireharehan'ny, miaina amin'ny afo ny fanahiny hamely ny Jiosy, ary mampianatra ny asa ho haingana, izany no nitranga fa, raha mbola nihazakazaka teo amin-kery, dia lavo tamin'ny kalesy, ary ny tongony dia ory amin'ny lehibe fanorotoroana momba ny tena.
9:8 ary, ka dia feno ny fireharehan'ny olombelona mihoatra noho fitaovana, toa tena ho didy mihitsy aza ny onjan-dranomasina sy ny lanjany na dia amin'ny avo eny an-tendrombohitra tamin'ny mizana. Fa ankehitriny, nanetry tena tamin'ny tany, dia nentiny teo amin'ny filanjana, miantso ny tenany ho vavolombelona ny hanehoana herim-panahy avy amin'Andriamanitra.
9:9 Koa dia, kankana swarmed avy amin'ny ratsy fanahy vatana, ary, araka izay nonina teo amin'ny fanaintainana, ny nofony nihemotra, ary avy eo ny fofona odorous nampahory ny tafika.
9:10 Ary izay, kely eo anatrehan'ny, Nihevitra fa afaka mikasika ny kintana eny amin'ny lanitra, tsy misy olona afaka hiaritra hitondra, noho ny fofona tsy azo leferina.
9:11 Ary noho izany, Nanomboka teo, ho voataonan'ny amin'ny mavesatra fireharehan'ny ny admonishment ny loza avy amin'Andriamanitra, izy no voalohany izay tonga amin'ny fahatakarana ny tenany, ny fanaintainan'ny mitombo isaky ny indray mipi-maso amin'ny alalan'ny.
9:12 Ary, rehefa tsy azony na dia mitondra ny fofona, dia niteny toy izany: "Tsy hanaiky fotsiny ho an'Andriamanitra, ary ny eto an-tany dia tsy tokony hihevitra ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra. "
9:13 Ary ratsy fanahy ity nivavaka tamin'ny Tompo, avy izay, taty aoriana, dia mety ho tsy mamindra fo.
9:14 Ary ny tanàna, ny izay nandeha faingana ny handrodana izany kosa tamin'ny tany ary hanao izany ho fasana, izy izao te ho maimaim-poana.
9:15 Ary ny Jiosy, izay efa nilaza fa Azo antoka fa tsy mandinika na dia mendrika ny halevina, fa hanafaka azy ireo mba ho rava ny voro-manidina sy ny bibidia, ka dia handringana azy ny zanany madinika, dia izao nampanantena ny hanao mitovy ny Atenianina.
9:16 Ary na dia ny tempoly masina, izay izy mandra nandroba, dia ho hampahamendrika amin'ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra, ary hampitombo ny fanaka masina, ary mandoa vola miditra tsy ho eo ny fiampangana mikasika ny sorona.
9:17 Ankoatra ireo zavatra ireo, izy mihitsy aza ny tenany ho Jiosy, ary dia namakivaky toerana rehetra eto an-tany, ary manambara ny herin 'Andriamanitra.
9:18 Fa, ny fanaintainana rehefa tsy nitsahatra, (ho an'ny marina fitsarana efa manafotra azy,) ao amin'ny famoizam-po dia nanoratra ho any amin'ny Jiosy, ao ny fanaon'ny ny fifonana, taratasy ahitana toy izany:
9:19 "Ho an'ny olom-pirenena tsara indrindra ny Jiosy, Antiokosa, mpanjaka sy ny mpanapaka, maniry be ny fahasalamana, sy ny fifanampiana, sy fahasambarana.
9:20 Raha toa ianao sy ny zanakao fiompy tsara, Ary raha ny zava-drehetra dia araka ny sitraponao, dia manome fisaorana lehibe indrindra.
9:21 Ary noho izany, raikitra amin'ny fahalemena, nefa tsara fanahy mahatsiaro anao, Aho rehefa niverina avy amin'ny toeram-Persia, ary, rehefa nosamborin'ny kilema lehibe, Nihevitra aho fa ilaina ny manana olana ho an'ny soa iombonana,
9:22 tsy very fanantenana amin'ny tenako, fa manana fanantenana lehibe ho afa-mandositra ny kilema.
9:23 Koa, mihevitra fa ny Raiko koa, nandritra ny fotoana izay dia nitondra miaramila ho any amin'ny faritra ambony, nampisehoana iza no handray ny mpitarika nanaraka azy,
9:24 amin'izay mba, Raha tokony hisy na inona na inona mifanohitra, na ny mety ho olana raha tokony tatitra, ireo izay tao an-faritra, satria fantatrareo izay ny zava-drehetra efa bequeathed, tsy ho voahelingelina.
9:25 Ho fanampin 'ireo zavatra ireo, mihevitra fa handefasana no akaiky indrindra sy ny mpiara-monina hery hanotrika fa ianao no havana fotoana sy eo am-piandrasana ny hetsika tsara, Efa voatondro zanako, Antiokosa, tahaka ny mpanjaka, izay matetika nidera ny maro aminareo raha mbola mandeha ao amin'ny faritany ambony. Ary dia soratako ho azy izay efa nanampy ambany.
9:26 Ary noho izany, Mifona aminao aho, ary mangataka anao, fa ny fahatsiarovana ny soa miankina sy tsy miankina, tsirairay dia hanohy hatrany ho mahatoky ho ahy sy ny zanako.
9:27 Fa matoky aho fa izy no hitondra tena amin'ny antonony sy ny maha-olombelona, ary izay, manaraka ny tiany hatao, dia ho hanavakavaka anao. "
9:28 Ary toy izany koa ny mpamono olona sy ny mpiteny ratsy an'Andriamanitra, rehefa avy namely tena ratsy, araka izay ihany no nitondrany ny hafa, nandalo avy amin'ity fiainana ity ao amin'ny fadiranovana maty an-tany hafa any an-tendrombohitra.
9:29 fa Filipo, izay kolokoloina aminy, nitondra ny vatany, ary, natahotra ny zanak'i Antiokosa, niditra tao Ejipta ho any Ptolémée Philometor.
2 Makabeo 10
10:1 Fa Makabeo sy ireo izay niaraka taminy, ny Tompo azy ireo fiarovana, na dia azony indray ny tempoly sy ny tanàna.
10:2 Dia nandrava ny alitara, ny hafa firenena izay efa naorina teny an-dalambe, ary toy izany koa ny Aseraha.
10:3 Ary, rehefa voadiony ny tempoly, dia nanao alitara hafa. Ary, maka vato mamirapiratra avy ao amin'ny afo, no niantomboka nanatitra fanatitra indray rehefa afaka roa taona, dia niainga ditin-kazo manitra, ary ny jiro, ary ny mofo aseho.
10:4 Rehefa avy nanao ireo zavatra ireo, ka nitalaho ny Tompo, miampatra amin'ny tany, fandrao ho lavo indray ho ratsy toy izany, fa koa, raha toa ka tokony na oviana na oviana ny fahotana, mba ho amin'ny alalany nofaizana malemy fanahy kokoa, ary tsy hatolotra eo ny firenena hafa rehetra sy ny fitenenan-dratsy ny olona.
10:5 Avy eo, tamin'ny andro izay ny tempoly efa voaloton'ny hafa firenena, nony tamin'ny andro iny ihany fa ny fanadiovana no tanteraka, tamin'ny andro fahadimy amby roa-polo tamin'ny volana, izay Kislev.
10:6 Ary izy ireo nandritra ny valo andro nankalaza tamim-pifaliana, ao ny fomba fanomanana ny fetin'ny Tabernakla, mahatsiaro fa, kely ny fotoana alohan'ny, izy ireo no nankalaza ny fotoam-pivavahanareo ny fetin'ny Tabernakla any an-tendrombohitra sy lava-bato, ao ny fanaon'ny bibidia.
10:7 Noho io, izao izy ireo nisafidy ny hitondra sampany sy ny sampan maitso nitana sampan-drofia, ho an'izay efa nanambina ny fanadiovana ny toerana.
10:8 Ary namoaka didy iraisana fitsipika sy ny didim-panjakana, fa ny vahoaka rehetra ny Jiosy no tokony hitandrina izany andro izany isan-taona.
10:9 Ankehitriny tokoa Antiokosa, izay atao hoe malaza, natao ny tenany ho toy izany teo amin'ny fandehan'ny ny ainy.
10:10 Fa manaraka dia mamaritra ny zava-nitranga tamin'i Eupator, ny zanaky ny ratsy fanahy Antiokosa, abridging ny ratsy izay nitranga tany amin'ny ady.
10:11 Fa raha Nihevitra ny fanjakana, nanendreny, tonian'ny raharaha amin'i ny fanjakana, anankiray Lysia, mpitarika ny Fenisianina sy ny miaramila Syriana.
10:12 Fa Ptolémée, izay atao hoe Macer, Nanapa-kevitra ny ho hentitra ny rariny amin'ny Jiosy, indrindra fa noho ny heloka izay efa natao ho azy ireo, ary ny miatrika azy ireo am-pilaminana.
10:13 Fa, izany no antony, nampangain'ny teo anatrehan'i Eupator amin'ny namany, ary matetika antsoina hoe mpamadika. Fa efa nandao an'i Sipra, izay Philometor efa nankinina taminy. Ary noho izany, hamindra ny Antiokosa Epifana, mihitsy aza izy niala taminy. Ary namarana tena tamin'ny poizina.
10:14 fa Gorjiasa, raha izy no mpitarika ny toerana, nitondra azy vao tonga, matetika nanafika ny Jiosy.
10:15 Raha ny marina, ny Jiosy, izay mihazona ny trano mimanda stratejika, nentiny teny an ireo izay nandositra avy tany Jerosalema, ary dia nitady hiady.
10:16 Raha ny tena izy, ireo izay niaraka Makabeo, mitalaho amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny vavaka mba ho mpanampy, nanao fanafihana mahery vaika teo amin'ny trano mimanda ny Idomeanina.
10:17 Ary, fikirizana be hery, dia nahazo ny toerana, namono ireo izy ireo nihaona, ary nanapaka teo amin'ny rehetra tsy latsaky ny roa alina.
10:18 Na izany aza ny sasany, nony efa nandositra roa tsara tilikambo fonenana, nanome ny endriky ny ady indray.
10:19 Dia Makabeo namela Simona sy Josefa, ary toy izany koa Zachaeus, ary ireo izay nomba azy, hiady aminy. Ary satria ireo izay niaraka taminy dia ampy isa, dia niverina ho an 'ireo izay nanafika amin-kery kokoa.
10:20 Raha ny marina, ireo izay niaraka Simon, tarihin'ny avarice, nandresen-dahatra ny vola avy amin'ny olona sasany, izay teo amin'ny tilikambo. Ary nandray fito alina didrachmas, dia navelany nandositra ny sasany.
10:21 Fa raha ny zavatra efa natao efa nilaza tamin'i Makabeo, nanangona miaraka ny mpitarika ny vahoaka, dia niampanga ireo izay nivarotra ny rahalahiny-bola, rehefa nampodin'ny mpianany ny fahavalony.
10:22 Noho izany, dia novonoiny ireo izay nanao zavatra ho mpamadika, Ary nisambotra ny roa haingana tilikambo.
10:23 Ary noho izany, manana fitaovam-piadiana sy ny fahombiazana eo amin'ny zava-drehetra dia nalain'i an-tanana, ka mihoatra noho ny roa alina ao amin'ny trano mimanda roa.
10:24 ary Timoty, izay efa resin'ny Jody teo anatrehan'i, miaraka niantso ny vahoaka ny miaramila hafa firenena sy ny mpitaingin-tsoavaly avy any Asia manangona, tonga toy ny hoe te hisambotra Jodea miaraka amin'ny fitaovam-piadiana.
10:25 fa Makabeo, sy ireo izay niaraka taminy, araka izay efa nanakaiky, nivavaka tamin'ny Tompo, afafy vovoka ny lohany sy ny fanehoany ny valahany amin'ny lamba fisaonana.
10:26 Ary lainga niankohoka teo am-faladiany ny alitara, dia nivavaka azy ny mamela heloka azy ireo, fa ho fahavalo ny fahavalony, ary ny fahavalo ny fahavalony, araka ny lalàna, hoy.
10:27 Ary noho izany, rehefa avy nivavaka, nandray fitaovam-piadiana, dia nandroso nisambotra avy any an-tanàna, ary, tonga akaiky akaiky ny fahavalo, dia nanorim-ponenana tao.
10:28 Fa, raha vao niposaka ny masoandro, andaniny sy ny ankilany raikitra ny ady: ireo olona manana ny antoka ny fandresena sy ny fahombiazana araka ny herin 'ny Tompo, nefa ny olon-kafa manana herim-po toy ny mpitarika amin'ny ady.
10:29 Fa, raha mbola niady mafy, ny mpanohitra dia niseho tany an-danitra ny olona mitaingin-tsoavaly dimy, izay dia voaravaka lamboridin volamena, manome mpitarika ho an'ny Jiosy.
10:30 Roa tamin'izy ireo, manana eo afovoany Makabeo sy ny manodidina azy tamin 'ny fitaovam-piadiana, niaro azy izy. Fa, amin'ny fahavalo, dia nanipy lefona tselatra, ka dia niankohoka teo, raha samy sahiran-tsaina amin'ny fahajambana, ary feno korontana.
10:31 Koa, nisy roa alina no maty diman-jato amby, miaraka amin'ny enin-jato-tsoavaly.
10:32 Raha ny tena izy, Timoty nandositra ho any Gazara, fiarovana mafy amin'ny voaro mafy, izay Chaereas no niandraikitra.
10:33 dia Makabeo, sy ireo izay niaraka taminy, Faly nanao fahirano ny fiarovana mafy nandritra ny efatra andro.
10:34 Fa ireo izay tao anatiny, matoky ny herin'ny toerana, niteny ratsy tsy misy fetrany sady namoaka teny nefarious.
10:35 Fa raha ny andro fahadimy vao nazava ratsy, roa-polo tanora izay niaraka tamin'i Makabeo, harehitry in fanahy noho ny fitenenan-dratsy, amim-pahasahiana nanatona amin'ny rindrina, ary, mandroso amin'ny herim-po masiaka, niakatra izany.
10:36 Koa, ny hafa ihany koa nahazo nanaraka ireny, nandeha nametraka afo ho amin'ny tilikambo sy eo am-bavahady, ary handoro ny niteny ratsy velona.
10:37 Avy eo, dia nitohy nandritra ny roa andro mba Hataoto mariry ny ho any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana, novonoiny Timothy, izay hita nanafina ny tenany tao amin'ny fitoerana iray. Ary izy ireo koa dia namono ny rahalahiny Chaereas, sy Apollofana.
10:38 Rehefa vita izany, dia nisaotra an'i Jehovah amin'ny hira sy ny fitanisan-keloka, izay efa nanao zava-dehibe teo amin'ny Isiraely, ary nanome azy ny fandresena.
2 Makabeo 11
11:1 Saingy fotoana fohy rehefa afaka izany,, Lysia, ny Governoran'i ny mpanjaka sy ny havany akaiky, ary izy koa dia niandraikitra ny governemanta, dia mafy nandanja eo ny zava-nitranga.
11:2 Ny fiaraha-mivory valo arivo, miaraka amin'ny rehetra ny mpitaingin-tsoavaly, izy, hamely ny Jiosy, nieritreritra fa ny tanàna azo antoka ho voasambotra, manao azy ho fonenan'ny ny Jentilisa,
11:3 amin'ny fahamarinana, koa ny mieritreritra ny hanao tombony amin'ny vola avy any amin'ny tempoly, toy ny avy ao amin'ny toerana masina hafa ny jentilisa, ary hametraka ny fisoronana ny hivarotra isan-taona.
11:4 Tsy manaiky ny herin 'Andriamanitra, fa inflated ao an-tsaina, dia natoky ny haben'ny ny miaramila an-tongotra, sy ny mpitaingin-tsoavaly an'arivony, ary amin'ny valo-polo elefanta.
11:5 Ary noho izany, dia niditra tao Jodia, ary, manatona Beti-zora, izay tao amin'ny fitoerana èty, Amin'ny elanelam-potoana io ny dimy stadio avy tany Jerosalema, dia ny manao fahirano an'io batery fiarovan'ny.
11:6 Ary rehefa Makabeo sy ireo izay niaraka taminy ny fiarovany mafy tsapako fa ireo nanao fahirano, izy ireo sy ny vahoaka rehetra niara-nangataka ny Tompo tamin'ny fitomaniana sy ranomaso, mba hampanalainy Anjely tsara hamonjy ny Isiraely.
11:7 Ary toy izany koa ny mpitarika Makabeo, nandray fitaovam-piadiana, Nampirisika ny hafa, mba hiaritra dia mampidi-doza niaraka tamin'i Kristy, ary hitondra fanampiana ho an'ny rahalahiny.
11:8 Ary rehefa miara-dia mivoaka miaraka amin'ny toe-tsaina vonona, niseho tany Jerosalema ny mpitaingin-tsoavaly, miramirana teo aloha azy ireo amin'ny fitafiana sy amin'ny fitaovam-piadiana volamena, manofahofa lefona.
11:9 Ary izy rehetra niara-nisaotra ny Tompo feno famindram-po, sy nanatanjaka ny fanahiny, rehefa piomanana hiadiana amin'ny alalan'ny tsy ny lehilahy ihany, fa koa ny biby masiaka indrindra ny vy sy ny rindrina.
11:10 Dia toy izany no, dia nandeha avy hatrany, manana mpanampy avy any an-danitra, ary ny Tompo mandray hiantra azy.
11:11 Avy eo, nihazakazaka mafy manohitra ny fahavalo, ao ny fanaon'ny liona, dia namely eo aminy: iraika ambin'ny folo arivo sy miaramila an-tongotra iray enin-jato amby arivo an-tsoavaly.
11:12 Ka dia niverina ny sisa nandositra. Kanefa maro tamin'izay, rehefa naratra, na inona na inona afa-nandositra tamin'ny. Ary afa-nandositra koa izy Lysia, nandositra amin-kenatra.
11:13 Ary satria tsy mahay mandinika, mieritreritra ny tenany momba ny fahaverezan efa nanjo azy, sy miezaka hahatakatra ny Hebreo mba ho tsy mety resy izy ireo, satria miankina amin 'ny fanampian' Andriamanitra Tsitoha, dia naniraka ho any aminy,
11:14 ary nampanantena izy fa manaiky ny zava-drehetra izay fotsiny, ary mba handresy lahatra ny mpanjaka mba ho namana.
11:15 Dia Makabeo nanaiky ny fangatahan 'Lisiasa, mihevitra fa mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Ary na inona na inona Makabeo nanoratra ho Lisiasa, ny amin'ny Jiosy, ny mpanjaka nanaiky izany.
11:16 Fa nisy taratasy nosoratana ho an'ny Jiosy avy any Lisiasa, izay, tokoa, dia ahitana toy izany: "Lysia, ny vahoakan 'ny Jiosy: fiarahabana.
11:17 John sy ny Absaloma, izay efa nirahina avy tany aminao mba hanafaka ny asa soratra, nangataka aho fa hametraka ireo zavatra ireo izay dikan'ny azy.
11:18 Noho izany, na inona na inona mety ho entina eo anatrehan'ny mpanjaka, Efa nanolotra azy. Ary efa nilefitra amin 'ireo zavatra izay navela.
11:19 Raha, noho izany, ianao mitandrina ny tenanareo amin'izany zavatra izany mahatoky amin'ny, avy eo, manomboka izao, Hiezaka aho mba ho anton 'ny tsara.
11:20 Fa tsipiriany hafa, Efa nomeko didy amin'ny alalan'ny teny, roa ireo, ary ho an 'ireo izay efa nirahina avy amiko, mba manome aminao.
11:21 veloma. Tamin'ny efa-polo amby zato taona fahavalo, tamin'ny andro fahefatra amby roa-polo tamin'ny volana Dioscorus. "
11:22 Fa ny taratasy mirakitra ny mpanjaka izany: "Mpanjaka Antiokosa tamin'i Lisiasa, rahalahiny: fiarahabana.
11:23 Koa satria ny Ray efa nafindra amin'ireo andriamanitra, Vonona isika fa ireo izay ao amin'ny fanjakana dia tokony hanao zavatra tsy misy tabataba, ary tokony hanatrika tsara ho any an-olana.
11:24 Efa renay fa ny Jody dia tsy manaiky ny raiko mba niova ho amin'ny fombam-pivavahana ny Grika, fa izy ireo nisafidy ny ho any foana ny andrim-panjakana, ary, noho io, mba mangataka amintsika mba hamela azy ireo ny lalàna.
11:25 Noho izany, te ity firenena ity, toy izany koa, mba hahita izay hitoerako, efa nahatratra ny fitsarana fa ny tempoly dia tokony haverina aminy, mba hanao zavatra araka ny fanaon'ny razany.
11:26 Ianareo, dia ho soa, noho izany, Raha aterinareo ho azy ireo ary hanome azy ireo ny antoka, ka dia ny sitrapontsika lasa fantatra, ary mba ho be herim-po, ary mety mikarakara ny zavatra ilainy. "
11:27 Marina tokoa, ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka no ny Jiosy dia toy izany: "Antiokosa mpanjaka ho amin'ny Antenimieran-doholona ny Jiosy, ary ny sisa amin'ny Jiosy: fiarahabana.
11:28 Raha toa ianao ka tsara, izany no irinay. Fa ny tenanay dia tsara ihany koa.
11:29 Menelasa tonga tao aminay, nanao hoe: izay te hidina manokana, izay eto amintsika.
11:30 Noho izany, dia manome antoka ny fiarovana ho an 'ireo izay tonga sy mandeha, hatramin'ny fahatelopolo andro ny volana Xanthicus,
11:31 ka ny Jiosy mba mampiasa ny sakafo sy ny lalàna, tahaka kosa izy eo anatrehan'ny, ary mba tsy hisy amin'izy ireo no tokony hiaritra izay mety ho fahoriana ny zavatra izay efa nisy zavatra nataony izay tsy fahalalana.
11:32 Ary noho izany, no ihany koa naniraka Menelasa, iza no miresaka aminao.
11:33 veloma. Tamin'ny efa-polo amby zato taona fahavalo, tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana Xanthicus. "
11:34 Fa ny Romanina koa ankehitriny nandefa taratasy, manana izao ao anatiny: "Ny fahadimy Memmius sy Titosy Manlius, iraka ny Romanina, ny vahoakan 'ny Jiosy: fiarahabana.
11:35 Momba ireo zavatra ireo izay Lysia, ny havana 'ny mpanjaka, efa nilefitra ho anao, izahay koa dia nilefitra.
11:36 Fa ny zavatra toy izany araka izay nitsara ny tokony ho niresaka momba ny mpanjaka, naniraka olona, raha vao niresaka tamim-pahazotoana tokoa ianao eo aminareo, dia mba manao didy, toy ny manaiky hiara-anao. Fa isika ka te-Antiokia.
11:37 Ary, noho izany, faingàna hanoratra indray, ka mba ho fantatray na inona na inona mety ho ny sitraponao.
11:38 veloma. Tamin'ny efa-polo amby zato taona fahavalo, tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana Xanthicus. "
2 Makabeo 12
12:1 Rehefa afaka izany fifanarahana natao, I Lysia teo ho any amin'ny mpanjaka, fa ny Jiosy nanaiky ny asa fambolena.
12:2 Na izany aza, ireo izay niala: Timothy, ary Apolloniosa, ny zanak'i Gennaeus, niaraka tamin'i Hieronymus, ary Demophon, ary, Ankoatra ireo, Nikanora, governoran'i Sipra, tsy mamela azy ireo hiaina amim-piadanana sy mangina.
12:3 Marina tokoa, ny an'i Jopa koa nahamenatra heloka ny tena asa. Nangataka izy ireo ny Jiosy, izay nonina teo aminy, mba hiakatra any an sambo kely, izay efa namboariny, mbamin'ny vady aman-janak'ireo, toy ny hoe tsy misy fototra fankahalana teo anelanelan'ny azy ireo.
12:4 Ary noho izany, araka ny mahazatra didim-panjakana tao an-tanàna, dia nanaiky ho azy ireo, dia tsy nanana ahiahy ary satria nisy fiadanana. Ary rehefa nanao ho any amin'ny lalina, dia maty an-drano tsy latsaky ny roan-jato amin'izy ireo.
12:5 Rehefa Jodasy nianatra ny habibiana natao tamin'ny mponina teo amin'ny fireneny, dia nilaza ny olona izay nomba azy, ary, dia niantso an 'Andriamanitra, Marina Mpitsara,
12:6 izy ka nandeha hiady amin'ny executors ny rahalahiny, Ary dia napetrakao ny seranan-tsambo eo amin'ny afo amin'ny alina; nodorany ny sambo, fa ny olona nisambotra fierena amin'ny afo, fa nandringana tamin'ny sabatra.
12:7 Ary nony nanao ireo zavatra ireo toy izany, dia niala, toy ny hoe hiverina indray ny hamongorana ny rehetra tany Jopa.
12:8 Fa rehefa tonga saina koa izay avy Jamnia te hanao zavatra toy izany koa ny Jiosy monina ao aminy,
12:9 izy ka nandeha hiady ny an'i Jamnia koa amin'ny alina, Ary rehefa nampirehetiny ny seranan-tsambo eo amin'ny afo, miaraka amin'ny sambo, loatra ka ny fahazavan 'ny afo niseho tany Jerosalema, ary efa-polo amby roan-jato stadio lasa.
12:10 Ary rehefa niala teo izao sivy stadio, ka nanao ny lalana an'i Timoty, Nihaona izy ireo tamin'ny ady tamin'ny ny an'i Arabia: dimy arivo lahy sy an-tsoavaly diman-jato amby.
12:11 Ary raha misy ady mafy nitranga, ary, noho ny fanampian 'Andriamanitra, dia nitsahatra tsara, ny sisa ny Arabo izay mandresy nangataka Jodasy mba hanome azy ny antoka, mampanantena ny hanome azy kijana sy hanampy azy amin'ny zavatra hafa amin'ny hoavy.
12:12 Ary Jodasy, nieritreritra fa mety ho tena ilaina amin'ny fomba maro, Nampanantena ny fiadanana. Ary rehefa avy nahazo ny antoka ny tànany ankavanana, dia niala ho any amin'ny lainy.
12:13 Ary izy koa nanafika tanàna mafy anankiray, manodidina amin'ny tetezana sy ny rindrina, izay mponina ny vahoaka avy amin'ny firenena maro samy hafa, ny anaran 'izay Casphin.
12:14 Raha ny marina, ireo izay tao anatiny, matoky ny herin 'ny rindrina sy ny fanomanana ny sakafo, nanao irresponsibly, ary izy ireo fanamby Jodasy amin'ny teny ratsy sy niteny ratsy, ary koa amin'ny alalan'ny miteny izay tsy mety.
12:15 Fa Makabeo haingana ho any amin'ny manda mafy, niantso izy noho ny haben'ny Mpitarika 'izao tontolo izao, izay, tsy lohondry vy na milina ny ady, efa noravana ny mandan'i Jeriko tamin'ny andron'i Josoa.
12:16 Ary, rehefa nahafaka ny tanàna noho ny sitrapon 'ny Tompo, nanao famonoana tsy hita isa, loatra ka dobo iray nifanila, stadio ny sakany roa, hita hirotsaka amin'ny ran'ny voavono.
12:17 avy teo, dia niala dimam-polo amby fiton-jato sy stadio, dia tonga tany Charax, ho an 'ireo Jiosy izay atao hoe Tubianites.
12:18 ary Timoty, tokoa, dia tsy nahita amin'izany toerana, fa dia lasa fony izy tsy mbola nahavita ezaka rehetra, nandao ambadiky ny tena nametrahany miaramila mpiandry tao amin'ny fitoerana iray.
12:19 Fa Dositeo sy Sosipatera, izay mpifehy tamin'i Makabeo, nandringana izany izay tavela amin'ny Timoty tao amin'ny batery fiarovana: iray alina.
12:20 ary Makabeo, rehefa napetraka enina arivo sy iray alina ny manodidina azy, ary dia nizara azy ho olony i, nivoaka hamely an'i Timoty, izay nitondra iray hetsy miaramila an-tongotra roa alina, ary diman-jato amby roa arivo an-tsoavaly.
12:21 Fa raha Timoteo fa ny fahatongavan'ny Jodasy, dia naniraka mialoha ny vehivavy, ary ny ankizy, ary ny sisa amin'ny fanomanana, ho fiarovana mafy, izay atao hoe Carnion. Fa dia tsy nety resy sy sarotra ny fidirana noho ny narrowness ny toerana.
12:22 Ary raha ny voalohany andiana miaramila Jodasy efa niseho, ny fahavalo dia nozoin 'ny tahotra avy eo anatrehan' Andriamanitra, izay mahita ny zava-drehetra, ary izy ireo dia nampandositra, nifanongoa, ho toy izany hany ka izy ireo rehefa nandondòna ny iray hafa ka ho naratra tamin'ny kapoka araka ny sabatra.
12:23 Fa nanenjika azy ireo Jodasa mafy, nanasazy ny tsy masina, ary namono telo alina ny lehilahy.
12:24 Raha ny marina, Timoty no lavo tamin 'ny vondrona Dositeo sy Sosipatera eo ambany. Ary be nangataka, dia niangavy azy mba hamotsotra azy sambo-belona, satria natao ny ray aman-dreny sy ny rahalahiny ny maro tamin'ny Jiosy, izay, tamin'ny nahafatesany, mety hitranga mba ho fomba ratsy.
12:25 Ary rehefa navelany ny finoany fa hampody azy ireo araka ny fifanarahana, dia nalefany soa aman-tsara, noho ny rahalahiny '-panahy.
12:26 Dia lasa nandeha i Jodasy mba Carnion, izay nahafaty dimy arivo amby roa-.
12:27 Rehefa avy novonoina ho nandositra na namono ireo, Nifindra niaraka tamin'ny miaramilany no nasainy Efrona, tanàna mimanda, izay nisy nipetraka maro samy hafa firenena. Ary tovolahy Hardy, nitsangana teo amin'ny rindrina ihany, ataovy mafy ny ady. Koa, eto amin'ity toerana ity, nisy milina maro ny ady, sy ny fitaovana narendrika nanaovana zana-tsipika.
12:28 Ary rehefa niantso ny Tsitoha, izy mbamin'ny heriny manorotoro ny herin'ny fahavalo, izy ireo nisambotra ny tanàna. Ka dia namely dimy arivo amby roa-'ireo izay teo anatiny.
12:29 avy teo, izy ireo nankany an-tanànan 'SKYTIA, izay enin-jato stadio babo avy tany Jerosalema.
12:30 Fa ny Jiosy, izay teo anivon 'ny Skytianina, nijoro ho vavolombelona fa izy ireo dia voatsabo tsara fanahy anilany, ary izay, na dia ao amin'ny fotoana ny fahoriana, efa voatsabo azy malemy fanahy.
12:31 Dia nisaotra azy, nananatra azy mba ho tsara fanahy ny olona, amin'izao fotoana izao sy amin'ny fotoana hafa. Dia nandeha tany Jerosalema izy ireo, tahaka ny fotoam-pivavahanareo ny fito herinandro dia mandeha.
12:32 Ary, taorian'ny Pentekosta, dia nandeha hamely an'i Gorjiasa, ny lehibe indrindra mpanapaka Idomea.
12:33 Dia nivoaka izy telo arivo sy miaramila an-tongotra an-tsoavaly efa-jato.
12:34 Ary rehefa tonga niara-, dia nitranga fa vitsy ny Jiosy naringana.
12:35 Raha ny tena izy, anankiray Dositeo, mpitaingin-tsoavaly ny Bacenor, lehilahy matanjaka, nihazona an'i Gorjiasa. Ary Heroda naniry voasambotra azy velona, dia nisy mpitaingin-tsoavaly ny Thracians Nihazakazaka azy sy nanapahany ny sandriny, ary noho izany, amin'izao fomba izao, Gorjiasa nandositra ho any Maresa.
12:36 Fa raha ireo izay niaraka Esdris efa niady ny tontolo andro, ka dia reraka, Jodasy niantso ny Tompo mba ho mpanampy sy ho filohany amin'ny ady.
12:37 Nanomboka tamin'ny ny fitenin 'ny ray, ary mafy nidera hira, dia ara-tsindrimandry ny miaramilan'ny Gorjiasa mba handray sidina.
12:38 Ary Jodasy, rehefa nanangona ny miaramilany, nankany an-tanàna Adolama. Ary, rehefa tonga ny andro fahafito, ka nandio tena araka ny fanao, ka dia mbola nitandrina ny Sabata amin'ny toerana iray.
12:39 Ary ny andro manaraka, Jodasa nitondra ny manokana, mba hanaisotra ny fatin'ny olona lavo, ary ny hametraka azy ireo any amin'ny sepulchers ny razany, tamin'ny razany.
12:40 Fa tsy nahita, ambanin'ny akanjo lava ny voavono, ny sasany tamin'ny rakitry ny sampy teo akaikin'i Jamnia izay, izay voararan'ny ny Jiosy araka ny lalàna. Noho izany, dia nanjary hita fa noho izany antony izany dia efa ripaka.
12:41 Ary noho izany, izy rehetra fitsarana nitso-drano ny marina 'ny Tompo, izay efa nanao zava-miafina miseho.
12:42 Koa dia, nitodika-tena ny vavaka, dia nangataka azy fa ny fahadisoana izay efa natao ho hatolotra eo an fanadinoana. Ary tena, Jodasa ilay mahery dia mahery namporisika ny vahoaka mba tena, nefa tsy fahotana, satria efa hitany ny maso izay nitranga noho ny fahotan 'ireo izay namono.
12:43 Ary, miantso fivoriambe, dia naniraka roa arivo amby iray alina drakma volafotsy tany Jerosalema, ho namono zavatra ho fanatitra noho ny fahotan 'ny maty, mieritreritra tsara sy ara-pinoana momba ny fitsanganana amin'ny maty,
12:44 (fa raha tsy ary nanantena fa ireo izay efa lavo dia hitsangana amin'ny maty, dia ho toa tsy ilaina, ary zava-poana ny mivavaka ho an'ny maty,)
12:45 ary satria nihevitra fa ireo izay efa nodi-mandry amin'ny toe nanana fahasoavana be voatahiry ho azy ireo.
12:46 Noho izany, dia hevitra masina sy mahasoa ny mivavaka ho an'ny olona efa lasa, mba ho afaka amin'ny fahotana.
2 Makabeo 13
13:1 Tamin'ny efa-polo amby zato taona fahasivy-, Jodasy Takatro fa tamy Antiokosa Eupator dia olona maro hamely an'i Jodea.
13:2 Ary ny namany dia Lisiasa, ny Procureur, izay niandraikitra ny governemanta, ka niaraka taminy amby zato sy iray alina tongotra solders, an-tsoavaly dimy arivo, ary roa amby roa-polo elefanta, ary telo-jato kalesy haingam-pandeha amin'ny lelany curved.
13:3 Koa Menelasa manaiky ho an'i azy ireo, ary maro lainga dia niangavy Antiokosa, tsy izay hahasoa ny fireneny, fa manantena fa ho voatendry ho mpitondra aloha.
13:4 Fa ny Mpanjakan'ny mpanjaka nifoha ny sain'i Antiokosa manohitra ny mpanota. Ary rehefa nilaza izany i Lysia mba ho ny anton 'ny ratsy rehetra, dia baiko (araka ny fanao aminy) no dia nosamboriny ka maty tao amin'ny toerana iray.
13:5 Ary nisy, amin'ny toerana iray, tilikambo dimam-polo hakiho, manana antontan-lavenona manodidina. Izany Nisy tily nandritra ny hantsana.
13:6 avy teo, dia nanome baiko izany sacrilegious iray mba horavana any an-lavenona, rehetra ao aminy ao an loatra ny any ankoatra.
13:7 Ary amin 'izany lalàna, Hay ny mpamadika ny lalàna, Menelasa, maty, tsy manana loatra toy ny fandevenana eto an-tany.
13:8 ary tokoa, izany afa-po ny rariny, fa araka izay nataony fahadisoana maro nanatrika ny alitara 'Andriamanitra, ny afo sy ny lavenona izay masina, toy izany no nanamelohany ho faty amin'ny lavenona.
13:9 Fa ny mpanjaka, ny saina maha-voafehy, tonga manambara ny tenany ho ratsy ny Jiosy noho ny rainy.
13:10 Rehefa nahatakatra izany i Jodasy, Nandidy ny olona izy mba hiantso ny Tompo andro aman 'alina, amin'izay mba, toy ny foana, ankehitriny koa izy hanampy azy ireo.
13:11 Mazava ho azy, natahotra ny ho omena ny amin'ny lalàny sy ny firenena, ary ny tempoly masina, ary koa mba hamela ny olona, izay vao haingana naka aina vetivety, mba ho resy indray amin'ny fitenenan-dratsy ny firenena.
13:12 Ary noho izany, rehefa niara-nanao izany rehetra izany, ary rehefa nitady famindram-po avy amin'ny Tompo sy ny fifadian-kanina-dranomaso, miampatra amin'ny tany nandritra ny telo andro mandrakariva, Jodasy nananatra azy mba hanomana ny tenany.
13:13 Raha ny marina, ny anti-panahy no nanapa-kevitra fa, teo anatrehan'ny mpanjaka ny miaramilany afaka nifindra ho any Jodia sy hahazo ny tanàna, izy ireo nivoaka ka manao ny vokatry ny zava-nitranga ho amin'ny fitsarana ny Tompo.
13:14 Ary noho izany, manome ny zava-drehetra ho an'Andriamanitra, ny Mpahary izao tontolo izao, dia namporisihiny ny mba hifanditra amim-ny fahavononana ary ny hitsangana, na dia ho amin'ny fahafatesana, fa ny lalàna, ny tempoly, ny tanana, ny firenena sy ny olom-pirenena: dia napetraka ny tafiny manodidina Modìna.
13:15 Ary rehefa nanome ny famantarana ny fandresena 'Andriamanitra, dia namely ny vazan-mpanjaka alina, ny zatovony voafantina matanjaka, ary izy koa no namono efatra arivo lahy izy tao an-toby, ary ny lehibe indrindra ny elefanta, miaraka amin'ireo efa napetraka ho azy.
13:16 Ary noho izany, rehefa nameno ny tobin'ny ny fahavalony lehibe indrindra tahotra sy ny korontana, dia nandeha tamim-pahombiazana tanteraka.
13:17 Ankehitriny dia izany no natao tamin'ny voalohany fahazavan 'andro, amin 'ny Tompo nanampy sy niaro azy ireo.
13:18 Fa ny mpanjaka, rehefa nahazo ny fanandramana ny fahasahiana ny Jiosy, niezaka ny haka ny toerana sarotra ny fihendreny.
13:19 Ary noho izany, Nifindra niaraka tamin'ny toby tany Beti-zora, izay mimanda miaramilan'ny Jiosy. Fa raha namely, dia nataony nandositra, ary mihena ny isan'ny.
13:20 Ary Jodasy dia naniraka ilaina ho an 'ireo izay tao anatiny.
13:21 fa Rhodocus, ny anankiray avy any amin'ny tafika jiosy, nitatitra ny zava-miafina tamin'ny fahavalo, ka dia nitady, nahazo ny, ary naiditra am-ponja.
13:22 Indray, ny mpanjaka natao miresaka amin'ny olona tao Beti-zora. Dia nomeny ny tanany ankavanana ho antoka, ary nanaiky azy, ka dia lasa nandeha.
13:23 Ary nilahatra hiady amin'ireo Jodasy; dia resy. Fa rehefa tonga saina fa Filipo, izay efa sisa avy ireo zava-niseho, efa niodina tany Antiokia, dia tao an-consternation-tsaina, ary, mangataka ny Jiosy, ary ho manaiky azy ireo, nianianany tamin'ny zava-drehetra izay toa fotsiny. Ary, rehefa mihavana, dia namono zavatra hatao fanatitra, voninahitra ny tempoly, ary dia nandao fanomezam-pahasoavana.
13:24 Ary namihina Makabeo, ary izy nanendry azy ho komandy sy ny mpitarika avy any Ptolemaisa rehetra ny lalana mankany amin'ny Gerrenians.
13:25 Fa rehefa tonga tao Ptolemaisa, ny Ptolemaians nandinika ny toe-piainana mavesatra ny fifanarahana, ho tezitra izy ireo fandrao mba hanafoanako ny fifanarahana.
13:26 Dia Lisiasa dia niakatra tany amin'ny fitsarana, ary nanazava ny antony, ary nampitony ny vahoaka, ary dia niverina ho any Antiokia. Ary izao no fomba nandeha zavatra momba ilay dia sy ny fiverenan 'ny mpanjaka.
2 Makabeo 14
14:1 Fa rehefa afaka kelikely, ny telo taona, Jodasy sy ireo izay niaraka taminy takany fa Demetriosa ny Séleucus fa niakatra ho any amin'ny toerana stratejika amin'ny vahoaka mafy indrindra, ary ny tafika an-dranomasina tao amin'ny seranan-tsambon'i Tripoli,
14:2 ary efa nahazo ny faritra tandrifin'i Antiokosa, ary ny mpifehy arivo, Lysia.
14:3 Ary nisy Alsima, izay efa mpisorona avo, fa izay tsitrapo nandoto ny tenany amin'ny andro ny mpiara-fifangaroana, tsy mihevitra ho tsy mety ny fiarovana, na ny fidirana ho eo amin'ny alitara,
14:4 nandeha tany Demetriosa mpanjaka tao amin'ny amby dimam-polo amby zato taona, fanatitra ho azy ny satro-boninahitra volamena, ary ny rofia, ary mihoatra noho ireo, sampana sasany izay toa isan 'ny tempoly. Ary, tokoa, tamin'izany andro izany, tsy niteny.
14:5 Fa, rehefa nihaona miaraka amin'ny fotoana ny fahaverezan-tsaina, dia niantso ny torohevitra nataon'i Demetriosa ary nanontany izay zavatra ny Jiosy niantehitra tamin'ny ary inona no ny fisainany.
14:6 Hoy ny navaliny: "Ireo teo anivon 'ny Jiosy izay atao hoe Hasideans, izay Jodasy Makabeo no lehibe indrindra, mamelona ady, ary hanangana fisarahana, ka tsy mamela ny fanjakana aza dia hampihavaniny.
14:7 Fa izaho koa, rehefa mamitaka avy amin'ny voninahitry ny razako (fa miteny ny Fisoronana Avo), Tonga eto,
14:8 voalohany, tokoa, eo amin'ny fanompoana mahatoky ho any amin'ny mpanjaka ny tombontsoan'ny, fa koa amin'ny maha-mpanolotsaina ny olom-pirenena. Fa ny firenena manontolo dia tsy latsa-danja ny fitondran-tena maloto nampahoriny.
14:9 Fa Miangavy anao aho, Ry mpanjaka ô, fahafantarana ireo zavatra ireo tsirairay, hikarakara na ny faritra sy ny olona, araka ny maha-olombelona, izay ampahibemaso fantatry ny rehetra.
14:10 Fa, raha mbola Jodasy mbola velona, dia azo atao ny raharaha aza dia hampihavaniny. "
14:11 Avy eo, rehefa nilaza zavatra toy izany teo anoloany, ny sisa amin'ny mpiara-, izay nitana ny tenany ho fahavalo an'i Jodasy, Naniry koa Demetriosa.
14:12 Ary niaraka tamin'izay dia naniraka Nikanora, ny mpitari-tafika eo amin'ny elefanta, ho any amin'ny toerana voalohany hamely an'i Jodea,
14:13 nanome baiko azy mba ho antoka hisambotra Jodasy ny tenany, ary, tena, hanely ireo rehetra izay niaraka taminy, ary nanendry Alsima ho mpisorona lehibe amin'ny tempoly.
14:14 Ary ny jentilisa, izay efa nandositra Jodasy niala avy tany Jodia, miharoharo amin'ny ondry aman'osy, ka Nikanora, nieritreritra fa ny fahoriana sy ny loza ny Jiosy ho lasa ny anton 'ny fanambinana.
14:15 Ary noho izany, raha ny Jiosy nandre ny fahatongavan'i Nikanora ary ny firenena nivory, izy ireo, afafy vovoka ny lohany, Nangataka azy Izy no nandamina ny vahoakany mba hitsimbinana azy ireo any amin'ny mandrakizay, ary toy izany koa niaro ny anjara tamin'ny famantarana mazava.
14:16 Avy eo, araka ny didin'i ny mpitarika, dia nifindra niala teo avy hatrany, ary niara-nivory tany amin'ny tanànan'i Dessau.
14:17 Raha ny marina, Simon, ny rahalahin'i Jodasa, nandrafitra ny ady tamin'i Nikanora, fa nanjary raiki-tahotra amin'ny tsy nampoizina fahatongavan'ireo ny fahavalo rehetra.
14:18 Na izany aza, Nikanora, satria reko ny herin 'ny namany Jodasy, ary ny herim-po lehibe, izay fanaovana niady mafy ho an'ny fireneny, natahotra ny hanatanteraka didim-pitsarana amin'ny sabatra.
14:19 Izany no antony, dia naniraka hialoha Posidonius, ary Theodotus, ary Matia, ka manome sy mandray ny antoky ny tsara tanana.
14:20 Ary raha misy natao filan-kevitra momba izany ny andro, ary ny mpifehy arivo nitondra izany teo imason'ny olona maro, izy rehetra iray kevitra mba manaiky ny fanekena.
14:21 Ary noho izany, dia nanendry andro iray, izay izy ireo dia asa samy izy mangingina, ary ny seza dia navoakany ka napetrany ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
14:22 Fa Jodasa toromarika olona efa voaomana hiady ho amin'ny toerana stratejika, fandrao karazana lolompo mety haniry tampoka avy amin'ny fahavalo. Ary nanana manaiky hiara fihaonambe.
14:23 Dia nitoetra tany Jerosalema Nikanora, Ary tsy nanao heloka; nony efa nampody ny ondry 'ny vahoaka, izay efa niangona.
14:24 Ary nihazona azy foana Jodasy sarobidy ny fo, ary tsara nanongilana manatrika ny lehilahy.
14:25 Dia nanontany azy Jesosy mba handinika vady, ary miteraka zazalahy. Izy nanambady; dia velona moramora, ary izy rehetra nonina tany iombonana.
14:26 Alsima fa nahita ny fitiavana no azony ho iray hafa, ary ny fifanarahana, nankany Demetriosa, ary nilaza taminy fa efa nanaiky Nikanora tombontsoa vahiny, ka efa nifidy Jodasy, mpamadika ho an'ny fanjakana, ho mpandimby azy.
14:27 Ary toy izany ny mpanjaka, ho sosotra ka niodina izany fiampangana tena ratsy fanahy, nanoratra ho Nikanora, nilaza fa izy tokoa overburdened ny fifanarahana ny fifanarahana, ka dia nandidy azy na izany aza mba handefa haingana tany Antiokia Makabeo aman-gadra.
14:28 Rehefa izany dia fantatra, Nikanora tao consternation, ka dia noraisiny ihany mafy fa ho foana ny zavatra tonga teo nanaiky, rehefa nahazo tsy ratsy tamin-dralehilahy.
14:29 Fa, satria tsy afaka hanohitra ny mpanjaka, dia nijery ny fahafahana hanaraka ny alalan 'ny didy.
14:30 fa Makabeo, nahita fa nanao zavatra bebe kokoa Nikanora fomba ofisialy niaraka taminy, ary izay, rehefa niara-nivory toy ny mahazatra, dia nampiseho nanivaiva, hahalala izao fitsitsiana tsy ho amin'ny tsara. Noho izany, ny fiaraha-mivory ny olom-bitsy, dia niery Nikanora.
14:31 Fa rehefa takany fa mahomby izy nisakana ny lehilahy, dia nankany amin'ny tempoly lehibe indrindra sy masina indrindra, ary nandidy ny mpisorona, nanatitra sorona ny mahazatra, mba hanafaka ny olona azy.
14:32 Rehefa niteny ireo fianianana taminy fa izy ireo dia tsy fantany izay izy no ilay efa nitady dia, izy dia nanatsotra ny tànany manandrify ny tempoly,
14:33 Ary nianiana, nanao hoe:: "Raha tsy hamonjy Jodasy ahy tamin'ny gadra varahina, Dia hampihena io toerana masina tany an-tany, ary Izaho mihady ny alitara, ary Izaho hanokana ity tempoly ity mba Liber ny Ray. "
14:34 Ary rehefa nilaza izany, dia niala. Fa ny mpisorona, ny fanolorana ny tànany nanandrify ny lanitra, niantso azy foana izay efa niady ho an'ny vahoakany, miteny izany:
14:35 "Tompo ô 'ny rehetra izao, izay mila na inona na inona, no sitrak'Andriamanitra fa ny tempoly ny fonenanao tokony ho amintsika.
14:36 Ary ankehitriny, Tompo O, Masina rehetra indrindra, hiaro unpolluted, mandra-mandrakizay, ity trano ity, izay vao haingana Madiova ianao. "
14:37 Ary Razias, dia nisy iray tamin'ireo anti-panahy avy tany Jerosalema, nentina teo anatrehan'i Nikanora; ny lehilahy dia tsara laza, ary izay tia ny tanàna. Fa ny fitiavana, dia natao hoe rain'ny Jody.
14:38 Ity iray ity, mandritra ny fotoana ela, natao hatrany ny fikasany momba ny fanohizana tamin'ny fivavahan'ny Jiosy, ary izy dia afa-po ny manolotra ny vatana sy ny fiainana, ka mba haharitra ao.
14:39 Ary Nikanora, raha vonona haneho ny fankahalany izay natao ho an'ny Jiosy, diman-jato nandefa miaramila mba hisambotra azy.
14:40 Fa nataony ho, raha nampijaly azy, dia mety hahatonga loza lehibe ny Jiosy.
14:41 Ankehitriny, toy ny vondrona nitady maika ao an-tranony, ary hamaky mamoha ny varavarana, ary na dia te hitondra amin'ny afo, araka izay efa ho nahazo ny, dia namely ny tenany tamin'ny sabatra:
14:42 misafidy ny ho faty amim-boninahitra kokoa fa tsy mba ho foto-kevitra ny mpanota, na hijaly tsy mendrika ny tsy rariny manohitra ny nahaterahany.
14:43 Fa, satria izy, faingana, tsy nahazo ny certitude ny fanapahan-kevitra ratra, sy ny vahoaka efa nisy triatra eo am-baravaran'ny, izy, mihazakazaka tamim-pahasahiana amin'ny rindrina, amim-pahasahiana niankohoka teo amin'ny vahoaka.
14:44 Haingana anefa izy ireo nanome ny toerana ho latsaka, ka dia niantsona tao afovoan-vozony.
14:45 Ary, satria mbola niaina, ary rehefa harehitry amin'ny fanahy, dia nitsangana teo, ary raha ny rà nikoriana teo amin'ny renirano lehibe, rehefa tena mafy naratra, dia nihazakazaka namakivaky ny vahoaka.
14:46 Ary nitsangana teo ambonin'ny vatolampy anankiray mideza, ary sady efa saika tsy misy ra, mitantana ny tsinainy amin'ny tanana roa, dia natsipiny ny tenany ny vahoaka, miantso ny Mpitondra eo amin'ny fiainana ary koa ny fanahy, mba hamerina izany aminy indray. Ary noho izany dia lasana hatramin 'ity fiainana ity.
2 Makabeo 15
15:1 Ary rehefa nahita Nikanora Jodasa mba ho ao an-toerana an'i Samaria, dia nanapa-kevitra ny hihaona azy amin'ny ady amin'ny herisetra, amin'ny andro Sabata.
15:2 Raha ny marina, ny Jiosy izay nanaraka azy avy tany dia tsy maintsy nanao hoe:: "Aza manao toy izany mafy sy barbariana, fa omeo voninahitra ny andro fanamasinana sy ny fanajana ho an'izay mahita ny zava-drehetra. "
15:3 Fa tsy faly ny olona nanontany, "Misy mahery any an-danitra Iray, izay nandidy ny andro Sabata mba hotehirizina. "
15:4 Dia namaly azy, "Misy velona koa Jehovah mihitsy any an-danitra, ny mahery Iray, izay nanome baiko ny andro fahafito mba hotehirizina. "
15:5 Ary dia hoy izy:: "Izaho koa no mahery eto an-tany, toy izany no andidiako fitaovam-piadiana ho entina, ka ny mpanjaka drafitra ho tanteraka. "Na dia izany aza, tsy nahazo amin'ny fanatanterahana ny drafitra.
15:6 ary Nikanora, Azo antoka fa rehefa nanandratra ny lehibe indrindra fizahozahoana, dia nanapa-kevitra ny hanorina ny tsangambato ampahibemaso ny fandresena ny Jodasy.
15:7 fa Makabeo, toy ny mahazatra, natoky rehetra manantena fa ho fanomezana ho an'i hanampy azy ireo.
15:8 Ary ny namporisihiny tsy hatahotra ny fahatongavan'ny ny firenena, fa ny ao an-tsaina foana ny fanampiana azony avy any an-danitra eo anatrehan'ny, koa ankehitriny mba manantena ho avy fandresena avy amin'ny Tsitoha.
15:9 Ary niteny taminy avy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany, mampahatsiahy azy ireo dia ny ady efa niady teo anatrehan'i, no nanaovany azy vonona kokoa.
15:10 Ary noho izany, rehefa nanangana ny herim-po, tamin'izany andro izany dia nanambara drafitra ny mpamitaka ny hafa firenena sy ny famadihana ny fianianany.
15:11 Dia fitaovam-piadiana isan-dahy, tsy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ny ampinga lehibe sy lefona, fa tamin'ny kabary tsara indrindra sy ny fananarana; ary dia nohazavainy taminy nofy, mendrika ny ho nino, izay dia faly tamin'izy rehetra.
15:12 Ary ny fahitana dia toy izany: Oniasa, izay efa mpisorona avo, tsara sy ny tsara fanahy ny olona, maotina ny amin'ny miseho, nalemy fanahy fahalalam-pomba, ary ny manan-kaja-teny, ary iza avy fahazazako dia nampianarina ny herim-panahy, manitatra ny tanany, Nivavaka ho an'ny rehetra ny vahoakan 'ny Jiosy.
15:13 Rehefa afaka izany,, niseho ihany koa ny olon-kafa, piderana fahanterana sy ny voninahiny, ary tamin'ny voninahitra lehibe mitondra ny momba azy.
15:14 Raha ny marina, Oniasa namaly tamin'ny hoe:: "Ity no tia ny rahalahiny sy ny lehilahy amin'ny Isiraely. Dia izay mivavaka indrindra ho an'ny olona sy ho an'ny rehetra, ny tanàna masina: Jeremia, 'Andriamanitra ny mpaminany. "
15:15 Ary Jeremia nampahazo ny tanany ankavanana, ary nomeny an'i Jodasy sabatra volamena, nanao hoe::
15:16 "Raiso ity sabatra masina ho toy ny fanomezana avy amin 'Andriamanitra, izany no hampikarapoka ny fahavalon'ny Isiraely oloko. "
15:17 Ary noho izany, rehefa namporisika ny tena tsara teny Jodasy, izay ny fahavononana sy ny herim-po ny zatovo dia afaka hatsangana sy hahazo hery, Tapa-kevitra ny hiezaka izy ireo sy ny hiady amin herimpo, mba hatsaran-toetra no hitsara ny raharaha, satria ny tanàna masina sy ny tempoly tao loza.
15:18 Ary ny fiahiana dia tsy ny vady aman-janak'ireo, ary toy izany koa tsy ny rahalahiny sy ny fianakaviany; amin'ny fahamarinana, ny lehibe indrindra sady voalohany tahotra dia ho masina ny tempoly.
15:19 Fa ireo koa izay tao an-tanàna kely tsy nanana fiahiana ho an'ireo izay efa nivory.
15:20 Ary, raha izao rehetra nanantena fa hitranga tsy ho ela ny fitsarana, ary raha teo akaiky ny fahavalo, ary ny miaramila dia efa napetraka tany mba, amin'ny biby sy ny mpitaingin-tsoavaly napetraka amin'ny toerana stratejika,
15:21 Makabeo, mandinika ny fahatongavan'ny ny vahoaka, ary ny fitaovam-piadiana isan-karazany ny fiomanana, ary ny firehetan'ny ny biby, ny fanolorana ny tànany ho amin'ny lanitra, niantso ny Tompo, Izay manao fahagagana, Izay manome fandresena ho an 'ireo izay mendrika, tsy araka ny herin 'ny fitaovam-piadiana, fa araka sitraky azy.
15:22 Avy eo, niantso toy izany, hoy izy:: "ianao, Tompo O, izay naniraka ny Angel teo ambanin'ny fanapahan'i Hezekia, mpanjakan'ny Joda,, ary izay namono amby zato sy dimy arivo amby valo-avy any an-toby Sankeriba,
15:23 koa ankehitriny, O Mpitondra ny lanitra, haniraka ny Anjely tsara eo anoloantsika, izay matahotra sy mangovitra noho ny halehiben'ny sandrinao,
15:24 ka dia izay manatona hamely ny olona masina amin'ny fitenenan-dratsy mety ho raiki-tahotra. "Ary toy izany, tokoa, dia namarana ny vavaka.
15:25 fa Nikanora, sy ireo izay niaraka taminy, nandroso Amin'ny trompetra sy ny hira.
15:26 Raha ny marina, Jodasy, sy ireo izay niaraka taminy, miantso an 'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, tonga hamely azy.
15:27 Tokoa, Niady tamin'ny tànany, fa nivavaka ho an'i Jehovah ny fony, dia namely tsy latsaky ny dimy arivo amby telo-, ho finaritra ny anatrehan'Andriamanitra.
15:28 Ary nony efa nitsahatra ka niverina tamin'ny fifaliana, dia tonga saina, noho ny fiadiany, fa efa voavono Nikanora.
15:29 Ary noho izany, manao tabataba sy namporisika mafy ny korontana, dia nitso-drano ny Tsitoha Tompo ny fitenin 'ny ray.
15:30 fa i Jodasy, izay rehetra voaomana manerana ny vatana sy fanahy ho faty noho ny olom-pirenena, nampianarina ny lohan'i Nikanora fa, ary ny tànany ny sandry, Tokony ho tapaka ary nentiny ho any Jerosalema ny alalan '.
15:31 Rehefa tonga, dia nampiangona ny mpiara-foko, ary ny mpisorona ho amin'ny alitara, dia niantso ireo koa izay tao amin'ny batery fiarovana.
15:32 Ary nasehony ny lohan'i Nikanora, ary ny nefarious tanana, izay efa omena ratsy ny Fanahy tranon'Andriamanitra ilay Andriamanitra Mahery Indrindra amin'ny tarehy rehareha.
15:33 Nandidy mihitsy aza izy ankehitriny fa ny lelan'ny ratsy fanahy dia tokony ho faty Nikanora ary nanome manorotoro ny vorona, fa ny tànan'i demented io lehilahy dia tokony ho nahantona tandrifin'ny tempoly.
15:34 Noho izany, izy rehetra nisaotra ny Tompo ny any an-danitra, nanao hoe:, "Sambatra izay niaro ny toerana uncontaminated."
15:35 Avy eo izy dia mihantona ny lohan'i Nikanora teo an-tampon'ny amin'ny batery fiarovana, ka hahatonga azy io ho famantarana miharihary sy miseho ny fanampiana avy amin'Andriamanitra.
15:36 Ary noho izany, Namoaka didy izy rehetra amin 'ny torohevitra tsy mba hamela izany andro izany tsy fankalazana,
15:37 fa mba hanao fankalazana tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana Adara, izay atao amin'ny teny Syriana: ny andro alohan'ny Mardochias andron'i.
15:38 Noho izany, izany zavatra izany dia tanteraka ny amin'i Nikanora, ary hatramin'ny fahiny ny tanàna nozakain 'ny Hebreo. Ary noho izany, Dia hamarana ny ny fitantarana eto.
15:39 Ary, tokoa, Raha nanao tsara, mba efa nanao ampy tantara, izany koa no tiako. Fa raha toa ka latsaky ny mendrika, Enga anie navela ahy.
15:40 Fa, araka ny manana ady ny misotro divay foana, na foana ny rano, dia tahaka izany koa indraindray mahafinaritra ny mampiasa ny iray, ary indraindray ny hafa. Noho izany, raha olona ny teny marina foana, dia tsy ho mampifaly ny mpamaky. Noho izany, eto dia ho vita.